အင်တာနက်ကျောင်းသားများအကြားတွင်ပြProbleနာရှိသောအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေအသုံးပြုမှုဆက်စပ်မှုကိုစစ်ဆေးခြင်း (၂၀၁၆) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn တွင်ဖြစ်သည်
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ (2016) တွေထဲမှာပြဿနာကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသုံးစွဲမှုဆန်းစစ်ပါဆက်စပ်မှု
J ကိုပြုမူနေစွဲ။ 2016 မေလ 9: 1-13 ။
Harper ကို C1, Hodgins DC1.
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်း (IP) စွဲလမ်း၏ဖြစ်ရပ်ဆန်းနာမည်ကျော်မီဒီယာအတွက်တိုးမြှင့်အာရုံစိုက်မှုရရှိမှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ research.What မျက်မြင်လက်တွေ့စမ်းသပ်ပြီးရသေးသည်အခြားတစ်ဦးချင်းဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အတူ IP ကိုအသုံးပြုအကြိမ်ရေနှင့်ငွေပမာဏကို, IP ကိုစွဲလက္ခဏာတွေနဲ့ဆက်စပ်နေတာကိုဘယ်လိုဖြစ်ပါသည်။
Calgary, ကနေဒါ, ကနေ 105 အမျိုးသမီးနှင့် 86 အထီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ (အသက် 21 ဆိုလို) IP ကိုအသုံးပြုမှုအစီအမံ, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာ (စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါ, အသက်ရှင်ခြင်းနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှု), စွဲလမ်းလိုလားသောဆက်ဆံရေးနှင့်စွဲလမ်း IP ကိုအသုံးပြုမှုကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်။
ယောက်ျားမိန်းမတို့သည်ထက်ထိတွေ့မှုနှင့်ပိုပြီးမကြာခဏလက်ရှိ IP ကိုအသုံးပြုအစောပိုင်းကအသက်အရွယ်ကဖော်ပြခဲ့သည်။ မဟုတ်ဆက်ဆံရေးအတွက်တစ်ဦးချင်းစီဆက်ဆံရေးအတွက်သူများထက်ပိုမိုမကြာခဏအသုံးပြုခြင်းကိုကဖော်ပြခဲ့သည်။ IP ကိုအသုံးပြု frequency ယေဘုယျအားဖြင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာဆက်နွယ်နေကြောင်းမခံခဲ့ရပေမယ့်သိသိသာသာအပြုသဘော IP ကိုစွဲလမ်း၏အဆင့်ကိုဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။ fIP စွဲဏ higher level ဆင်းရဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်ပြဿနာအရက်, ဆေးခြောက်, လောင်းကစားနှင့်အထူးသဖြင့်, ဗီဒီယိုဂိမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးက curvilinear အသင်းအဖွဲ့နေ့စဉ်သို့မဟုတ် သာ. ကြီးမြတ်သည် IP အသုံးပြုမှုကိုစွဲလမ်း IP ကိုရမှတ်များအတွက်တစ်ဦးချွန်ထက်မြင့်တက်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ထိုကဲ့သို့သောစွဲ၏ IP ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်အဆင့်အကြိမ်ရေအကြားရှာတွေ့ခဲ့သည်။
IP ကိုအသုံးပြုမှုနှင့်အထွေထွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများအကြားတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့သိသိသာသာဆက်ဆံရေးမျိုးကိုရှာဖွေရန်ပျက်ကွက် IP ကိုအသုံးပြုခြုံငုံအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အလိုလိုသေချာပေါက်အန္တရာယ်မပေးကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ လူတွေကို IP ကိုနေ့စဉ်သုံးစွဲဖို့စတင်တဲ့အခါမှာဆင်းရဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ဆက်နွယ်သောအိုင်ပီ၏စွဲလမ်းအသုံးပြုမှု, ပေါ်ထွက်လာ.
keywords: အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းစွဲ, ဗီဒီယိုဂိမ်းစွဲလမ်း, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ
သူတို့ရဲ့အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်း (IP) ကိုအသုံးပြုခြင်းပြဿနာဖြစ်လာသည်တောင်းဆိုတဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီ၏အစီရင်ခံစာများတိုးပွားလာရှိပါတယ်တည်ရှိ။ ဤအလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအားဖြင့်ဖော်ပြခဲ့သည်လက္ခဏာများ, ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်မျိုးစလုံး, လိင်စိတ်နိုးထအတွက်အလုပ်မဖြစ်နှင့်အော်ဂဇင်ရရှိ (ပါဝင်သည်Schneider, 2000), လိင်စိတ်တစ်ခုသို့မဟုတ်စစ်မှန်သောလက်တွဲဖော်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားအရှုံးနှင့်တဦးတည်းရဲ့ရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက် (မှာရှိတဲ့အကျိုးစီးပွားအရှုံးPoulsen, Busby, & Galovan, 2013) ။ ရောဂါလက္ခဏာများလည်းထိုကဲ့သို့သောစိတ်ကျရောဂါ, အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာအခွင့်အလမ်းများကိုဆုံးရှုံးများ၏အန္တရာယ်နှင့်လှုံ့ဆော်မှုများ၏မရှိခြင်း (အဖြစ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်ပြဿနာများ, အမျိုးမျိုးပါဝင်သည်Philaretou, Malhfouz, & Allen, 2005; လူငယ်တို့, 2004) အတော်များများမှာတစ်ဦးချင်းစီ (ကလေးများပစ္စုပ္ပန်များမှာဘယ်မှာခန်းထဲမှာ, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်သောကွန်ပျူတာပေါ်မှာ, ထိုကဲ့သို့သောအလုပ်မှာကအဲဒီလိုလုပ်ဖို့အလွန်အမင်းမသင့်လျော်သည့်အခါပင်အချိန်များတွင် IP ကိုကြည့်ရှုရန်အားကြီးသောမလှူ feeling ကိုဖော်ပြရန်Griffiths က, 2012လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များနှင့် ပတ်သက်၍ အလွဲလွဲမှားသောထင်မြင်ယူဆချက်များဖြစ်ပေါ်နေသည်။ ဥပမာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ (ဥပမာ ana-lxx) သည်သူတို့အမှန်တကယ်ထက်လူမှုရေးအရစံနှုန်းများကျသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ အခြားလွဲမှားသောယူဆချက်များသည်လူမျိုးရေးနှင့်ကျား၊ပတေရုသ & Valkenburg, 2007; Zillmann & Bryant, 1986).
ပြဿနာ IP ကိုအသုံးပြုမှုအပေါ်အရည်အသွေးသုတေသန (အချို့အသုံးပြုသူများကိုရပ်တန့်သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏အသုံးပြုမှုအပေါ်ခုတ်လှဲရန်ကြိုးစားနေအတွက်အခက်အခဲရှိသည်သောပြတော်မူပြီDelmonico & Miller က, 2003; Orzack & Ross က, 2000). ပြဿနာ IP ကိုအသုံးပြုသူများထံမှအခြားပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်သို့ရာတွင်အကောင့်မိမိတို့၏ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုရပ်နားခြင်းနှင့်ဆက်စပ်အပြုသဘောအပြောင်းအလဲများကိုကိုဖော်ပြရန်။ ဤပြောင်းလဲမှုများလိင်စိတ်၏ပြန်လာ, တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့် Self-တန်ဖိုးရှိ၏သဘောအရတစ်ဦးမြင့်တက်နှင့်ပိုမိုမြင့်မားအသက်နှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုများပါဝင် (Wilson က, 2014). ဤအလူတစ်ဦးချင်းစီ၏အတော်များများလည်းသူတို့ IP ကိုအသုံးပြုမှုဟာသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုထိခိုက်စေခဲ့ပုံကိုအဆိုးမသိခဲ့နောက်ကြောင်းပြန်အတွက်ဖော်ပြသည်။
ဤအအစီရင်ခံစာများ IP ကိုအသုံးပြုမှုကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေကြောင်းအကြံပြုနေစဉ်, IP ကိုလည်းအဖြစ်ကောင်းစွာကျေးဇူးအလျှင်းမပြုဘဲသက်ရောက်မှုဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောမသန်စွမ်းသူများအတွက်အဖြစ်ဘေးဖယ်လူဦးရေများအတွက်လိင်, ပျော်ရွှင်မှုကိုနှင့်စိုးရိမ်သောကများနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာအတွက်လျှော့ချအပေါ်အမျိုးမျိုးသောအပြုသဘောသက်ရောက်မှု, (များ၏အစီရင်ခံစာများရှိပါတယ်Kaufman, Silverberg, & Odette, 2007) ။ IP ကိုအသုံးပြုသူအများစုသည်၎င်းတို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝတွေကိုအဖြစ်၎င်းတို့၏ရင်းနှီးလိင်ဘဝတွေကို (တိုးတက်လာသည်ဟုဟုဆိုကာ, အပြုသဘောကမှတ်Hald & Malamuth, 2008) ။ အတော်များများကတစ်ဦးချင်းစီ (ဒီဝိသေသလက္ခဏာ၎င်းတို့၏အသိပေါ်မှာရှိခဲ့ပါတယ် IP ကိုအသုံးပြုနေစဉ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်လိင်၏ရှုထောင့်အခိုင်အမာဘဲလျက်သတင်းပို့နှင့်လွတ်မြောက်အကျိုးသက်ရောက်မှုKingston & Malamuth, 2010) ။ IP ကိုအသုံးပြုခြင်း (လိင်တူဆက်ဆံသူအဘို့ပိုပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှာဖွေရေးနှင့်အတည်ပြုဘို့ခွင့်ပြုထားပါတယ်McLelland, 2002; ဆက်စပ်မှု, 1995), ရိုးရိုး (Koch & Schockman, 1998), နှင့်ဖက်လိင်ကလူ (ကျယ်ပြန့်, 2002) ။ အင်တာနက်ကိုထောက်ပံ့ပေးသော privacy နဲ့အမည်မဖော်, လိင်အကြောင်းကိုထောက်ခံမှုနှင့်ဆက်သွယ်ရေးလန်းခွင့်ကိုတိုက်ရိုက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအပြန်အလှန်ထက်လျော့နည်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်ရေမှတ်တွေ့ရမယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့, အမျိုးသမီးများမကျင့်သောသူထက် သာ. လိင်ဘဝတွေကိုရှိခြင်းအိုင်ပီအစီရင်ခံစာကိုအသုံးပြုဖို့သူအ (Poulsen, Busby, & Galovan, 2013).
အိုင်ပီ (ကအတော်လေးမကြာသေးမီဖြစ်ရပ်ဆန်းဖြစ်ပါသည်Leiner, 2009), ထို့ကြောင့်, ဒီဒေသမှာရှိတဲ့သုတေသန limited.Moreover ဖြစ်ပါသည်, ခေါင်းစဉ်အများအပြားအယူအဆမှားများနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားဘက်လိုက်မှုနှင့်အတူအလွန်အထိခိုက်မခံနဲ့စရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ သို့သျောလညျးကို IP ၏နေရာအနှံ့နားလည်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်း၏အသုံးပြုမှုကို (အရွယ်ရောက်သူတို့တွင်အဒါပေမယ့်လည်းအသက်မပြည့်သေးလူဦးရေကြားတွင်မသာ, မကြာသေးမီနှစ်များတွင် ပို. ပို. ကျယ်ပြန့်ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်Sabina, Wolak, & Finkelhor, 2008) ။ well.The မီဒီယာနှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းယဉ်ကျေးမှု၏အခြားဒြပ်စင်မကြာသေးမီနှစ်များတွင်လျင်မြန်သော "ညစ်ညမ်း" လျှက်အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ကြသည်အဖြစ်ကျနော်တို့ (IP ကိုအသုံးပြုမှုများ၏လူ့အဖွဲ့အစည်းသက်ရောက်မှုကြည့်ဖို့စတင်နေကြသည်Attwood, 2006; Kinnick, 2007) ။ လူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ်ဒီတော့ကြီးမားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ဖို့နှင့်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်လုံလောက်သောဒီခေါင်းစဉ်အပေါ်နောက်ထပ်သုတေသနခိုင်လုံအကြောင်းပြချက်ဖြစ်သင့်ထိုကဲ့သို့သောခေတ်ပြိုင်ဖြစ်ရပ်ဆန်းသည်။
ညစ်ညမ်းတဲ့ကျယ်ပြန့်ငွေပမာဏက World Wide Web ပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးဖြစ်သည်။ ဒါဟာ (အကြမ်းအားဖြင့် 12 သန်းက်ဘ်ဆိုက်များမှနှိုင်းယှဉ်ထားသည်သောအင်တာနက် 24.6% ညစ်ညမ်း၏ရေးစပ်ကြောင်းခန့်မှန်းTwohig, Crosby, & Cox, 2009Web ကိုပေါ်မှာရှိသမျှရှာဖွေမှုများ) သို့မဟုတ် 156 ဘီလီယံခန့် gigabytes.Twenty-ငါးရာခိုင်နှုန်း (ညစ်ညမ်းများအတွက်များမှာRopelato, 2006) ။ 2007 ၏ကဲ့သို့ခပ်သိမ်းသောညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များအဘို့နှစ်စဉ်ဝင်ငွေ 20 ဒေါ်လာဘီလျံခန့်မှန်းခဲ့ပေမယ့်အခမဲ့ခွန်းညွန့်ပေါင်း (ကြောင့်အခမဲ့ညစ်ညမ်းရရှိနိုင်အွန်လိုင်းပမာဏကိုမှ 50 နှင့် 2007 အကြားညစ်ညမ်းင်ငွေအတွက် 2011% လျှော့ချခန့်မှန်းထားပါတယ်Barrett, 2012) ။ ဒါဟာ (မြောက်မြားစွာတစ်ဦးချင်းစီဒါလုပ်နေတာရှောင်ရှားရန်အားထုတ်မှုရှိနေသော်လည်းအင်တာနက်ပေါ်ရှိမတော်တဆဖတ်ရှုညစ်ညမ်းပစ္စည်းရှိခြင်းအစီရင်ခံခဲ့ကြကြောင်းကိုလည်းမှတ်သားရပါမည်Mitchell, Finkelhor, & Wolak, 2003).
Cooper က (1998) access ကို, တတ်နိုင်နှင့်အမည်မဖော်သူ Triple-တစ်ဦးကအင်ဂျင်အဖြစ်တံဆိပ်များဖြစ်သောသုံးဝိသေသလက္ခဏာများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအားဖြင့်မောင်းနှင်အဖြစ်အိုင်ပီ၏လူကြိုက်များဖော်ပြသည်။ မတိုင်မီက 1991 အတွက်က World Wide Web ၏ဖန်တီးမှုမှ, ကွန်ပျူတာကွန်ရက်များမှတဆင့်ညစ်ညမ်း၏အပြောင်းအရွှေ့သို့မဟုတ် peer-to-peer file sharing အတော်လေးကန့်သတ်ခဲ့သည်။ အားလုံးနီးပါးညစ်ညမ်းပုံနှိပ်နှင့်ဗီဒီယို format နဲ့အများပြည်သူအကြားဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်း၏သိမ်းယူမှုကိုယ်ထိလက်ရောက်လူကြီးစတိုးဆိုင်သို့မဟုတ်ပြဇာတ်ရုံကနေဝယ်ယူလိုအပ်သည်, ဤစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမကြာခဏအနုတ်လက္ခဏာအမည်းစက်နှင့်ဂုဏ်သတင်းကိုသယ်ဆောင်။ World Wide Web ကို၏စတင်ဖွဲ့စည်းနှင့်ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏နောက်ဆက်တွဲဖန်ဆင်းခြင်းကတည်းကညစ်ညမ်း၏အများပြည်သူအသုံးပြုမှုပေါက်ကွဲခဲ့သည်။ (ညစ်ညမ်းဖို့ Access ကိုပိုမိုလွယ်ကူမည်သည့်အခါမျှ, ဤကြောင့်အပြင်ပန်းဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်တွင်အင်တာနက် access ကိုခွင့်ပြုကြောင်းမိုဘိုင်းစမတ်ဖုန်း၏ဖန်တီးမှုမှအထူးသဖြင့်မှန်ငွေ, 2012) ။ အင်တာနက်ပေါ်ရှိညစ်ညမ်း၏အများစုသည်လည်းအသုံးပြုသူရန်မပိုဆောင်းကုန်ကျစားရိတ်မှာဝင်ရောက်စေခြင်းငှါ, နှင့်အသုံးပြုသူအစဉ်အဆက်သူတို့ကိုယ်သူတို့ခွဲခြားသတ်မှတ်သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏နေအိမ်များစွန့်ခွာရန်မလိုဘဲဒီညစ်ညမ်းရှုမြင်စေနိုင်သည်။
Cooper ကအပေါ်ကိုတိုးချဲ့၎င်း၏အသုံးပြုမှုကိုပြဿနာဖြစ်လာနိုင်ပါသည်ဘယ်လိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အထူးသဖြင့်အဓိကကြောင်းအိုင်ပီတစ်ခုစတုတ္ထဝိသေသလည်းမရှိ: "။ အသစ်အဆန်း" ၏လက္ခဏာအသစ်အဆန်းများဒီမှာအင်တာနက်ပေါ်ရှိရရှိနိုင်ခေါ်ဆောင်သွားပုံရိပ်၏ဧရာမငွေပမာဏနှင့်မတူကွဲပြားမှုကိုရည်ညွှန်းသည်။ တစ်ကြိမ်မှာနာရီပေါင်းဘဲလျက်ပြဿနာ IP ကိုအသုံးပြုမှုအစီရင်ခံစာကိုရှိခြင်းအဖြစ်ခွဲခြားသတ်မှတ်သူကိုတစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားခြားနားသောရုပ်တုဆင်းတုနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုရာပေါင်းများစွာသောရှာဖွေနေပေမယ့် (ကျေနပ်ခံစားဘယ်တော့မှOrzack & Ross က, 2000) ။ အခြားသူများကလည်း (ညစ်ညမ်းဖိုင်တွေထောင်ပေါင်းများစွာ၏စုဆောင်းရန်ဝန်ခံပေမယ့်သူတို့ကိုမဆိုပြန်လည်ဆွေးနွေးရန်ဖူးဘူးDelmonico & Miller က, 2003) ။ ဒီအမူအကျင့်ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်း၏သည်းခံစိတ်နှင့်လေ့သက်ရောက်မှုမှတူညီပြအဖြစ် obsessive "ရှာဖွေပြီးဆည်းပူး" အပြုအမူတွေနှင့်အင်တာနက်စွဲရောဂါ procrastinatory အပြုအမူတွေ (Davis က, Flett, & Besser, 2002).
ဦးနှောက်အတွက်လိင်ဆန္ဒလိင်အဆိုပါ telodiencephalic မျိုးဆက်ပွားရှုပ်ထွေးသော၏အချက်အချာဖြစ်သော medial preoptic ဧရိယာ, (အနည်းဆုံးအာရုံခံအချက်ပြမှုများကိုလှုံ့ဆော်ဖို့ဒဆိုက်ရောက်နှင့်အတူစတင်ကင်မ် et al ။ , 2013) ။ ဤရှုပ်ထွေးလည်း (စွဲလမ်းအတွက်ကွန်ယက်အများဆုံးပါဝင်ပတ်သက်သည် mesolimbic ဆုလာဘ်စင်တာများ၏အာရုံကြောကွန်ယက်ကိုထည့်သွင်းRoxo, Franceschini, Zubaran, Kleber, & Sander, 2011) .Neuroimaging လိင်ရရှိနိုင်မိတ်ဖက်များ၏ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှု (ဆိုလိုသည်မှာ, ညစ်ညမ်း) အမှန်တကယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ကြည့်ရှုအဖြစ် medial preoptic ဧရိယာတွင်တူညီသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေကြည့်ရှုပေါ်၌ဖြစ်လာဘာသာရပ်များ (နှိုးဆော်ခြင်းကြောင့်ပိုအလိုရှိကြသည်တွင်လေ့Hilton & Watts, 2011; Voon et al ။ , 2014) ။ အဘယ်အရာကိုကွဲပြားခြားနားသည်အင်တာနက်ကိုခေါ်ဆောင်သွားပုံရိပ်တစ်ခုကျယ်ပြန့်ပိုလျှံမှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်း, ဤပုံရိပ်၏အသစ်အဆန်းလက်တွေ့ကျကျလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်အတွက်အသစ်အဆန်းများအတွက် unending.The preference ကိုကောင်းစွာတိရိစ္ဆာန်နှင့်လူ့စမ်းသပ်ဘာသာရပ်များအတွက်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်: တစ်ဖြစ်ရပ်ဆန်းကိုမကြာခဏရည်ညွှန်း (ထို Coolidge အကျိုးသက်ရောက်မှုအဖြစ်Fiorino, Coury, & Phillips, 1997; Wilson က, 1997) ။ ဒါဟာ (စွဲလမ်းတ္ထုများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ဆင်တူကြောင်းအင်တာနက်ပေါ်ရှိဝတ္ထုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ဖို့ထိနျးခြုပျ access ကိုပု mesolimbic ဆုလာဘ်စင်တာတခုတခုအပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်Pitchers et al ။ , 2013; Barrett, 2010).
fMRI ပုံရိပ်သုံးပြီးတစ်ဦးကမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှု (ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက်ဘုံအာရုံကြောအတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက်မူးယစ်ဆေး-cue reactivity ကိုအကြားကွန်ယက်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ-cue reactivity ကိုတွေ့ရှိရVoon et al ။ , 2014) ။ ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်မူးယစ်ဆေးစွဲမူးယစ်ဆေးတွေကိုအဘို့အဖော်ပြရန်ကြောင်းညစ်ညမ်း၏တွေကိုတစ်ဦးနှင့်ဆင်တူအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုပြသ။ ဤရွေ့ကားသင်တန်းသားများကိုလည်းကြည့်ရှုမရသည့်အခါထက်ပိုညစ်ညမ်းကြည့်ရှုရန်မတရားသောအစီရင်ခံတင်ပြပေမယ်ထို့နောက်သူတို့ကကြည့်ရှုခဲ့ကြရသောအခါအတွေ့အကြုံခံစားမဟုတ်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဒါကမညီမျှမှု "ကဲ့သို့" အကြားတွေ့ရှိရနှင့် "လို" စွဲသုတေသနအတွက်မက်လုံးပေးလှုံ့ဆျောမှု၏သီအိုရီများနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်တယ် (ရော်ဘင်ဆင် & Berridge 1993; Voon et al ။ , 2014).
ဒါဟာ (ဦးနှောက်ကိုယ်တိုင်က၏ဇီဝဖွဲ့စည်းမှုကြောင့်မကြာခဏ IP ကိုအသုံးပြုပြောင်းလဲနိုင်လည်းဖြစ်နိုင်Kühn & Gallinat၊ ၂၀၁၄) ။ သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် Scan ဖတ်အဆိုပါ striatum ၏ညာဘက် caudate ၏မီးခိုးရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်အဆိုးအစီရင်ခံဖော်ပြထား IP ကိုအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။ လက်ဝဲ putamen ၏ functional activation အဖြစ်လက်ဝဲ dorsolateral prefontal cortex ခွင့် caudate ၏ functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုမှာလည်းအနုတ်လက္ခဏာဆက်စပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤ IP မှမကြာခဏထိတွေ့မှု downregulation ဖြစ်ပေါ်စေသည်နှင့်နောက်ခံဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံ၏ "ဝတ်ထား" ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ တစ်ဦးချင်းစီပြီးတော့ဝတ္ထုနှင့်ပိုပြီးအစွန်းရောက်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းတစ်ခုရှာဖွေရန်ဦးဆောင်တစ်ဦးပိုမိုအားကောင်းပြင်ပဆွထွက်ရှာအံ့သောငှါရပါမည်။ ဒီအမူအကျင့်စွဲ၏သည်းခံစိတ်နှင့်လေ့သက်ရောက်မှုမှခိုင်မာတဲ့တူညီပြသထားတယ်။ သို့သျောလညျး Kühnနှင့် Gallinat (2014) အိုင်ပီနဲ့မီးခိုးရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်နှင့် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူဤအသင်းအဖွဲ့မဟုတ်ဘဲမကြာခဏ IP ကိုအသုံးပြုမယ့်အကျိုးဆက်ထက်, ဦးနှောက်ထဲမှာပြီးသားပစ္စုပ္ပန်တစ်ဦးမရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်ညွှန်ပြစေခြင်းငှါသတိပြုပါ။
ဤအတွေ့ရှိချက်နေသော်လည်းတစ်ခုစွဲအဖြစ်ပြဿနာ IP ကိုအသုံးပြုခွဲခြားအငြင်းပွားစရာဖြစ်ခဲ့သည်။ သမိုင်းကြောင်းအရ, ဒါကြောင့်ဖြစ်စေချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ရောဂါ (အမျိုးအစားအဖြစ်တံဆိပ်ကပ်ထားပြီMorahan-မာတင်, 2005), (hypersexuality နှင့်လိင်မမှန်တစ်မျိုးကွဲအဖြစ်Kafka, 2010), သို့မဟုတ်အင်တာနက်စွဲရောဂါ၏မျိုးကွဲအဖြစ် (လူငယ်တို့, 2004). သေး၏အဖြစ်, ပြဿနာ IP ကိုအသုံးပွုရနျအတှကျအဘယ်သူမျှမပုံမှန်ရောဂါရှာဖွေစံသိသိသာသာသုတေသနကန့်သတ်သောမတည်ရှိ။ အင်တာနက်ကိုလိင်စစ်ဆေးခြင်းစမ်းသပ် (ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအကဲဖြတ်ရန်သောအနည်းငယ်အကြေး, နှစ်ခုသာပစ်မှတ် IP ကိုတိုက်ရိုက်၏Delmonico & Miller က, 2003) နှင့်ဆိုက်ဘာ-ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု Inventory (CPUI) (Grubbs, Sessoms, Wheeler, & Volk, 2010) ။ ထိုအကြေးခွံများနှစ်ဦးစလုံးရဲ့ IP ၏စွဲလမ်းသဘောသဘာဝအကဲဖြတ်အတွက်အလားအလာ psychometric ဂုဏ်သတ္တိများသရုပ်ပြပါပြီ။
အထောက်အထားတစျခုရဲ့ IP ကိုအသုံးပြုခြင်းစွဲလမ်းဖြစ်လာပေမည်အကြံပြုဖို့စုဆောင်းခဲ့သည်။ IP ကိုမှစွဲလမ်းစိတ်ကျရောဂါ, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း, တဦးတည်း၏ဘဝနှင့်ဆက်ဆံရေးနှင့်အတူမကျေနပ်မှုအဖြစ်အပျက်သဘောအကျိုးဆက်များနေသော်လည်းပိုပြီးအိုင်ပီကိုသုံးပါရန်တိုက်တွန်းအပါအဝင်ဆင်းရဲသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာလက္ခဏာတွေနဲ့ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု၏ရည်မှန်းချက်ပြဿနာ IP ကိုအသုံးပြုမှုကိုဤဆက်စပ်မှုကိုလေ့လာစူးစမ်းခြင်းနှင့် ပို. တိတိကျကျ, အပြုအမူနှင့် IP အသုံးပြုမှုပုံစံများစွဲခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ဆက်စပ်နေကြပုံကိုကွဲပြားခြားနားပိုင်းခြားသိမြင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤအဆက်ဆံရေး၏အကဲဖြတ်ကျွန်တော်တို့ကိုအသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေနဲ့ volume အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုများပေါ်ပေါက်လာနှင့်အတူတိုက်ဆိုင်ရာမှာယေဘုယျတံခါးခုံကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မည်။ ထိုမှတပါး, IP ကိုအသုံးပြုအကြိမ်ရေနဲ့ volume ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ရှိမရှိအဆုံးအဖြတ်ကို IP များနှင့်ပြဿနာအိုင်ပီ users.This နားလည်မှုအပန်းဖြေအသုံးပြုသူများအကြားဘာသာဂုဏ်ထူးအိုင်ပီ၏အသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏အသုံးပြုမှုကိုမှန်းပြီးအန္တရာယ်နည်းပါးအဆင့်အထိကလြော့နိုင်အောင်ကူညီနိုင်ပါတယ်။ အစောပိုင်းကဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းအချို့ပြဿနာအသုံးပြုသူများကသူတို့ရပ်တန့်မပေးမှီတိုင်အောင်မိမိတို့၏အသုံးပြုမှုသူတို့ကိုအခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်ကိုမသိညွှန်ပြကြသည်။ ထို့အပြင်, (စသည်တို့ကိုဥပမာအသက်အပိုင်းအခြား, စွဲလမ်းလိုလားသောဆက်ဆံရေး,) မြင့်မားပြဿနာသို့မဟုတ်စွဲလမ်း IP ကိုအသုံးပြုမှုကိုဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ကြောင်းတစ်ဦးချင်းစီအချက်များအကဲဖြတ်မှာ-အန္တရာယ်လူဦးရေကိုသိရှိနိုင်ဖို့ကကူညီလိမ့်မည်။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု၏အယူအဆရဲ့ IP အသုံးပြုမှုမြင့်မားအကြိမ်ရေနဲ့ volume စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများအစီအမံတွေနဲ့အဆိုးပတျသကျနှင့်အပြုသဘောစွဲ၏ဒီဂရီနှင့်အတူပါလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ။ ကျနော်တို့အသုံးပြုမှုအဆင့်ဆင့်စွဲလက္ခဏာတွေပေါ်ပေါက်ရေးနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်ရှိမရှိအကဲဖြတ်ဤဆက်ဆံရေး၏ Linear စူးစမ်းလေ့လာပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအကြားအတော်လေးဘုံများမှာအရာ, အရက်, ဆေးခြောက်, ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားများနှင့်လောင်းကစားများ၏ပြဿနာကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်အတူ IP ကိုစွဲလမ်း၏အသင်းအဖွဲ့စူးစမ်းလေ့လာပါလိမ့်မယ်။
နမူနာ (N = 191) ကို Calgary တက္ကသိုလ်မှသုတေသနပါ ၀ င်မှုစနစ်ဖြင့်စုဆောင်းခဲ့သည်။ ထိုတွင်စိတ်ပညာသင်တန်းများတွင်စာရင်းသွင်းထားသည့်ကျောင်းသားများသည်၎င်းတို့၏သုတေသနပါ ၀ င်မှုအတွက်အပိုဆုကြေးရရှိကြသည်။ အလားအလာရှိသောသင်တန်းသားများသည် ၄ ​​င်းတို့၏အိုင်ပီဆိုင်ရာအသုံးပြုမှု၊ မေးခွန်းပုံစံများကိုဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့်စွဲလမ်းမှုနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုတို့ဖြစ်သည်။
အဆိုပါမေးခွန်းလွှာ Qualtrics မှတဆင့်အွန်လိုင်းအုပ်ချုပ်ခဲ့သေးငယ်တဲ့အုပ်စုများအတွက်ပုဂ္ဂလိကပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တစ်ဦးချင်းစီပါဝင်သူအားဖြင့်ပြီးစီးခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကိုလေ့လာမှု၏သဘောသဘာဝအတိုင်းရှင်းလင်းခဲ့ကြသည်မေးခွန်းစတင်ခင်မှာ, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသို့မဟုတ်အထိခိုက်မခံမေးခွန်းတွေအလားအလာဟုမေးခံရ, အဲဒီနောက်စမ်းသပ်မှုမှာသူတို့ရဲ့အမည်မဖော်လိုစိတ်ချပါ။ အိုင်ပီနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ addressing မေးခွန်းများကိုအတူသင်တန်းသားများကို priming များ၏ပြဿနာကိုရှောင်ရှားရန်အဖြစ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာအကဲဖြတ်ဆောင်ရွက်ချက်များ, ပထမအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်, သူတို့ကဒီမေးခွန်းတွေကိုအနေဖြင့်မည်သည့်ကနဦးဒုက္ခဆင်းရဲတွေ့ကြုံခံစားသင့်ပါတယ်။
တစ်ဦးကအကျဉ်းချုပ်လူဦးရေစစ်တမ်းကိုအသက်အရွယ်, ကျားမ, နေထိုင်ရာဧရိယာ, ကြားဆက်ဆံရေးအဆင့်အတန်း, လိင်, ပညာရေး, အလုပ်အကိုင်အခြေအနေ, အိမ်ထောင်စုဝင်ငွေ, လူမျိုးရေး, ဘာသာရေးဆက်နွယ်မှု၏သတင်းအချက်အလက်အကဲဖြတ်, အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။
အကျဉ်းချုပ်ရောဂါလက္ခဏာတွေ Inventory 18
အဆိုပါအကျဉ်းချုပ်ရောဂါလက္ခဏာတွေ Inventory (BSI-18) ၏အတိုကောက်ဗားရှင်းရောက်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများကိုတိုင်းတာရန်အသုံးပြုခဲ့သည်: somatization, စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှု (Derogatis, 2001) ။ အဆိုပါ BSI-18 ၏စုစုပေါင်းရမှတ်များအတွက်နားဆင်နိုင်ပါတယ်ပြည်တွင်းရေးကိုက်ညီမှုခန့်မှန်းချက် (α = .89) အလွန်ကောင်းပါတယ်။
ယေဘုယျအားဘဝကျေနပ်မှု (ဘဝစကေး (SWLS) နဲ့ငါးကို item စိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်အတူအကဲဖြတ်ခဲ့သည်Diener et al ။ , 1985) ။ ဒါဟာစကေးကျဉ်းမြောင်းစွာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘဝကိုကျေနပ်အားရမှုကိုတိုင်းတာဖို့အသုံးပြုခြင်းနှင့်ကောင်းသောပြည်တွင်းရေးရှေ့နောက်ညီညွတ်မှု (α = .79) နှင့်ယာယီယုံကြည်စိတ်ချရ (အပါအဝင်မျက်နှာသာ psychometric ဂုဏ်သတ္တိများရှိပါတယ်နေသည်r = .80) .The စကေးကိုလည်း BSI-18 အပါအဝင်ပုဂ္ဂလဒိwell္သုခချမ်းသာ၏အခြားအစီအမံများနှင့်အတူအလွန်အမင်းဆက်နွယ်နေကြောင်း။
လက်ရှိဆက်ဆံရေးအတွက်ခုနစျပါး-item တခုကိုကြားဆက်ဆံရေးအကဲဖြတ်စကေးပြီးစီးခဲ့ပါဝင်သူ (Hendrick, Dicke, & Hendrick, 1998), သူတို့ရဲ့လက်ရှိဆကျဆံရေးကျေနပ်မှုသူတို့ရဲ့ယေဘုယျအဆင့်ကိုတိုင်းတာရန်။ ဒါဟာစကေး (မြင့်သော IP ကိုအသုံးပြုမှုနှင့်အတူကြောင့်ဆက်ဆံရေးအတွက်ပျင်း၏ခံစားချက်များကိုနှင့်အတူ၎င်း၏အဆင့်မြင့်ဆက်စပ်မှုတစ်ခုလေ့အစီရင်ခံဖြစ်ပျက်မှုကိုရှေးခယျြခဲ့သညျPoulsen, Busby, & Galovan, 2013) ။ ပိုမိုမြင့်မားသောရမှတ်တဦးတည်းရဲ့လက်တွဲဖော်နှင့်အတူတစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောစိတ်ကျေနပ်မှုကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ဆက်ဆံရေးအကဲဖြတ်စကေး (RAS) အတွက်ယာယီယုံကြည်စိတ်ချရ (အလွန်ကောင်းလှ၏r = .85) နှင့်ပြည်တွင်းရေးရှေ့နောက်ညီညွတ်မှု (α = .73) လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။
အဆိုပါအရက်အသုံးပြုမှုမမှန်ဖော်ထုတ်ခြင်းစမ်းသပ်မှု (စာရင်းစစ်; Babor, Higgins-Biddle, Saunders, & Monteiro, ၂၀၀၁), ပုဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်းမမှန်မှုများဖော်ထုတ်ခြင်းစမ်းသပ်မှု (CUDIT-R ကို -revised; Adamson et al ။ , 2010), နှင့်ထိုပြဿနာကိုလောင်းကစားပြင်းထန်မှုအညွှန်းကိန်း (PGSI; Wynn, 2003) ကျောင်းသားဘဝ၌ပစ္စုပ္ပန်သုံးဘုံစွဲလမ်းအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ကြသည့်အရက်, ဆေးခြောက်များနှင့်လောင်းကစားဝိုင်းအဖြစ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါစာရင်းစစ်ကောင်းသောပြည်တွင်းရေးရှေ့နောက်ညီညွတ်မှု (α = .80) ကိုပြသသည် CUDIT-R ကိုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပြည်တွင်းရေးရှေ့နောက်ညီညွတ်မှု (α = .94) ကိုပြသလျက်, PGSI သည်ဤအစီအမံများနှင့်စွဲလမ်းအကြားကောင်းသောပြည်တွင်းရေးရှေ့နောက်ညီညွတ်မှု (α = .84) သည့်ဆက်စပ်မှုကိုပြသ အိုင်ပီ၏အစီအမံ (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) ပြဿနာ IP ကိုအသုံးပြုမှုကိုစွဲလမ်းစေလိုတဲ့သဘောထားကိုနှင့်အလေ့အကျင့်တစ်ခုစပျစ်သီးပြွတ်ပိုင်စေခြင်းငှါပြသလိမ့်မည်။ အဆိုပါစာရင်းစစ်အပေါ် 8 ၏ရမှတ်များသို့မဟုတ်ပိုမိုမြင့်မားအန္တရာယ်ရှိသောနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောအရက်သုံးစွဲခြင်း၏အရိပ်အယောင်စဉ်းစားနေကြသည်။ အန္တရာယ်ရှိသောဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်း 13 တစ်ရမှတ်များပြဒါမှမဟုတ် CUDIT-R ကိုအပေါ်ပိုမိုမြင့်မားသည်။5+ ၏ရမှတ်များပြဿနာလောင်းကစားများ၏ညွှန်ပြစဉ်းစားနေကြသည်သော်လည်းအဆိုပါ PGSI အပေါ် 8 + ၏ရမှတ်များ (အလယ်အလတ်စဉ်းစားနေကြတယ်Currie, Hodgins, & Casey, 2013).
အဆိုပါစွဲအတိုင်းအတာနှင့်အတူရှိ၏ပါဝင်သောဂိမ်းစွဲမှု Inventoryfor လူကြီးများ (GAIA), စွဲလမ်း propensitiesto ဗီဒီယိုဂိမ်းအကဲဖြတ်ရန်ဖွံ့ဖြိုးပြီးတစ်စကေး (Wong & Hodgins, 2013) ။ အဆိုပါ GAIA ၏ခြုံငုံစွဲရမှတ် excellentinternal ယုံကြည်စိတ်ချရ (α = .94) ရှိပါတယ်။ Scoresof 30 + ပျော့-အလယ်အလတ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့် 40 ၏ရမှတ်များ + ပြဿနာအဆင့်ကို aresignificant နေကြသည်။ ပြဿနာ IP ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် problematicvideo ဂိမ်းအသုံးပြုမှုကိုနှစ်ဦးစလုံးကွန်ပျူတာများ andthe အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုပါဝင်ပတ်သက်နေကြောင်းမမှန်ဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ကဤ twodisorders အကြားအလယ်အလတ်ဆက်စပ်မှုကြိုတင်ခန့်မှန်း, ဤအတိုင်းအတာ၏ပါဝင်မှုကွန်ပျူတာနှင့်အင်တာနက်-based မမှန်များ၏အသင်းအဖွဲ့ explorationof အပိုဆောင်းဘို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းမေးခွန်းလွှာ၏ frequency / အသံအတိုးအကျယ်
သင်တန်းသားများကို IP ကိုအသုံးပြုမှုကိုအကဲဖြတ်ထားတဲ့ 11-ကို item သုတေသီပြုစုမေးခွန်းလွှာဖြေကြား။ မေးခွန်းများကိုပါဝင်သူရဲ့ IP ကိုအသုံးပြုခြင်း၏ကြိမ်နှုန်း (မိနစ်) (တစ်လလျှင်အစည်းအဝေးများအရေအတွက်), IP ကို ​​session တစ်ခုနှုန်းသုံးစွဲသည့်အချိန်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီ session တစ်ခုအတွင်းအသုံးပြုသောရုပ်ပုံများ / ဗီဒီယို / ဖိုင်တွေ / စာရွက်စာတမ်းများ၏နံပါတ်ပါဝင်သည်။ သင်တန်းသားများကိုလည်းအိုင်ပီမှသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးထိတွေ့မှုများ၏အသက်အရွယ်ညွှန်ပြရန်နှင့်ခေတ္တမျှစကားကြောင့်အတွေ့အကြုံ၏သဘောသဘာဝကိုဖော်ပြရန်ဖို့တောင်းခံခဲ့ရသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့သင်တန်းသားများကို IP ကိုအသုံးပြုမှုဟာသူတို့ရဲ့ကြိမ်နှုန်း, IP ကို ​​session တစ်ခုနှုန်းသုံးစွဲအချိန်ကိုရှိမရှိဟုမေးခဲ့သည်, နှင့် / သို့မဟုတ် session တစ်ခုနှုန်းအိုင်ပီပမာဏကိုယခင်တစ်နှစ်အတွင်းတိုးမြှင့်သို့မဟုတ်လျော့နည်းသွားခဲ့သည်။ စုစုပေါင်း IP ကိုထိတွေ့သည့်ပါဝင်သူရဲ့လက်ရှိအသက်အရွယ်ကနေထိတွေ့မှု၏ပထမဦးဆုံးအသက်နုတ်အားဖြင့်တွက်ချက်ခဲ့သည်။ IP ကိုမသုံးခဲ့ဘူးတဲ့သူသင်တန်းသားများကိုဒီတိုင်းတာမှုအနေဖြင့်ချန်လှပ်ခံခဲ့ရသည်။
အဆိုပါ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၏ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ် (5th ed .; DSM-5; American Psychiatric Association, 2013) အင်တာနက်ကိုဂိမ်း Disorder ဖော်ထုတ်ဘို့စံ၏ပဏာမအစုံတို့ပါဝင်သည်။ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ (သက်ဆိုင်ရာအကဲဖြတ်မေးခွန်းများကိုအစုတခုအဆိုပြုလိုက်ပါတယ်Petry et al ။ , 2014), IP ကိုစွဲသတ်မှတ်ချက်များအတွက်အကဲဖြတ်ရန်သုတေသီများကအဆင်ပြေအောင်ခဲ့ကြရသော (ကြည့်ရှု နောကျဆကျတှဲ) ။ အနည်းဆုံး rephrasing လိုအပ်သောဤပစ္စည်းများကိုပြွီး။ တချို့ကပစ္စည်းများကိုသီးခြားစီသူတို့ရဲ့စိတျအပိုငျးတစျခုစီအကဲဖြတ်ရန်ပိုပြီးကွဲပြားမေးခွန်းများကိုသို့တိုးချဲ့ပေးခဲ့သည်။ သုံးနောက်ထပ်မေးခွန်းများကို arousal, အော်ဂဇင်နှင့်နာကျင်မှုနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ကိစ္စရပ်များကိုအကဲဖြတ်ရန်ဆက်ပြောသည်ခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးက likert စကေး (လုံး  ရှားပါးသော  တခါတရံမှာ  မကြာခဏ  မဟုတ်) တစ်ဦးချမ်းသာ Datasets ဘို့ခွင့်ပြုမွေးစားခဲ့ပါတယ်။ အင်တာနက်ကိုဂိမ်း Disorder စံနှုန်းမေးခွန်းများကိုအတူအမျှအသီးအသီးမေးခှနျးကိုပြီးခဲ့သည့် 12 လရည်ညွှန်းခဲ့ပါတယ်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု (α = .90) ၏နမူနာအတွင်းပစ္စည်းများစုစုပေါင်းကို item ဆက်စပ်မှု .55 ထံမှ .76 အရွယ်ရှိ .Corrected အကြားတစ်ဦးကမြင့်မားသောပြည်တွင်းရေးကိုက်ညီမှုတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဆိုက်ဘာ-ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုစာရင်း - မလှူအတိုင်းအတာ
နောက်ဆုံးတွင် CPUI (Grubbs et al ။ , 2010) လက်ခံနိုင်သောယုံကြည်စိတ်ချရမှု (α> .80) နှင့်တည်ဆောက်မှုခိုင်လုံသောသက်သေအထောက်အထားအချို့ကိုပြသခဲ့သည်။ အဆိုပါ compulsive subscale IP ကို ​​အသုံးပြု. ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့အလိုဆန္ဒရှိနေသော်လည်း Self-စည်းမျဉ်းအပြုအမူတွေကိုတစ်ဦးတစ်ဦးချင်းစီရဲ့မရှိခြင်းအကဲဖြတ်ရန်ဖို့ရည်ရွယ် 11-ကို item စကေးဖြစ်ပါသည်။
IP ကိုအသုံးပြုမှုကိုအကြားဆက်ဆံရေး (ကြိမ်နှုန်း, အချိန်နှင့်ပမာဏကို) နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာ, စွဲအစီအမံများနှင့် IP ကိုစွဲ bivariate Pearson ဆက်စပ်မှုနှင့်လွတ်လပ်သောနမူနာသုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည် t-tests ။ sequential polynomial ဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (Wuensch, 2014) IP ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများအကြားဆက်ဆံရေးကို, linear quadratic, ဒါမှမဟုတ်ကုဗရှိမရှိအကဲဖြတ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒီဆက်နွယ်မှု၏ပုံသဏ္ဍာန်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင် IP ကိုအသုံးပြုမယ့်အလားအလာတံခါးခုံကိုသိရှိနိုင်ဖို့လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ ဖော်ပြရန်အကြောင်းအရာအလိုက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (Braun & Clarke, 2006) IP ကိုမှပထမဦးဆုံးထိတွေ့မှု၏အတွေ့အကြုံများမှပါဝင်သူတုံ့ပြန်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့မျိုးစုံဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြဿနာနှင့်စွဲလမ်း IP ကိုအသုံးပြုမှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းကြောင်းမှာ-အန္တရာယ်အချက်များအကဲဖြတ်ရန်တွက်ချက်ခဲ့သည်။ စာရင်းအင်းဘေးထွက်မသိချင်ယောင်အဆောင်ရဲ့ IP ကြိမ်နှုန်း, အချိန်နှင့်ပမာဏကိုတိုင်းတာမှုများအတွက်ချိန်ညှိခဲ့ကြသည်။ အကြိမ်ရေအဘို့, 60, 50 နှင့်တစ်လလျှင် 40 ကပ်ကာလ၏ဘေးထွက်မသိချင်ယောင်အဆောင်တုံ့ပြန်မှုတစ်လလျှင် 34, 33 နှင့် 32 ကြိမ်မှချိန်ညှိခဲ့ကြသည်။ အိုင်ပီ session တစ်ခုနှုန်းသုံးစွဲအချိန်များအတွက် 120, 100 နှင့် 95 မိနစ်များ၏ဘေးထွက်မသိချင်ယောင်အဆောင်တုံ့ပြန်မှု 63, 62 နှင့် 61 မိဖို့ချိန်ညှိခဲ့ကြသည်။ အိုင်ပီ / session ရဲ့ပမာဏကိုအဘို့, 100 ညစ်ညမ်းပစ္စည်းများကို / session ရဲ့အသုံးပြုမှုများ၏ဘေးထွက်မသိချင်ယောင်အဆောင်တုံ့ပြန်မှု 61 ပစ္စည်းများမှချိန်ညှိခဲ့ပါတယ်။
ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာသုံးသပ်ချက်ကိုတက္ကသိုလ်ရဲ့ Conjoint ဌာနသုတေသနကျင့်ဝတ်ဘုတ်အဖွဲ့ကထောက်ပံ့ပေးခဲ့ရသည်။ အားလုံးဘာသာရပ်များလေ့လာမှုအပေါင်းတို့နှင့်တကွပေးအသိပေးထားသောသဘောတူခွင့်ပြုချက်နှင့် ပတ်သက်. အသိပေးခံခဲ့ရသည်။ မေးခွန်း၏ပြီးစီးပေါ်၌သင်တန်းသားများကို debriefed နှင့်လေ့လာမှုမဆိုစိတျအပိုငျးကသူတို့ကိုဒုက္ခဆင်းရဲစေသောခဲ့မယ်ဆိုရင်အကြံပေးခြင်းရှာဘယ်မှာပေါ်သတင်းအချက်အလက်ပေးထားခဲ့ကြသည်။
191 ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားများကိုများ၏တုံ့ပြန်မှု, 86 ယောက်ျားနှင့် 105 အမျိုးသမီး, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည်. အသက်အရွယ် 21.05 နှစ်ပေါင်းခဲ့ဆိုလို (SD = 2.96, အကွာအဝေး = 17 မှ 38) နှင့်လူမျိုးစုအများအားဖြင့်ကော့ကေးဆပ် (n တရုတ်ကနောက်မှ (97)၊n = ၂၃) တောင်အာရှ (n လက်တင်အမေရိက (= ၂၀)n = ၁၂)၊ အရှေ့တောင်အာရှ (n = 8), အနက်ရောင် (n = 6), အာရပ် (n အခြား (n = ၅) ဖိလစ်ပိုင် (n = ၄) အနောက်အာရှn ကိုရီးယား (n = ၄) ဘော်ရီဂျင်နီ (n = ၂) နှင့်ပြင်သစ်ကနေဒါ (n = ၁) နှစ်စဉ်အိမ်ထောင်စုဝင်ငွေစုစုပေါင်းကို ၂၇% သောကျောင်းသားများကဒေါ်လာ ၁၀၀,၀၀၀ နှင့်အထက်အစီရင်ခံကြသည်။n $ 52 အောက်တွင်အစီရင်ခံ = 21) နှင့် 10,000% အစီရင်ခံ (n = 40) .Current ဆက်ဆံရေးအခြေအနေ 50% တစ်ခုတည်းဖြစ်ခဲ့သည် (n = 96), 17% ချိန်းတွေ့ (n လေးနက်သောဆက်ဆံရေးတွင် (၃၂%) နှင့် ၃၃% သည် (n = 63) .Participants အများစုလိင်ကွဲဖြစ်ကြသည် (n = 162), 6% ပါဝင်သူလိင်တူဆက်ဆံသူအဖြစ်ဖော်ထုတ်နှင့်အတူn = 12), ရိုးရိုး 6%n = 11) နှင့် 3% asexual အဖြစ်ဖော်ထုတ် (n = 6) .Participants ဘုရားမဲ့ဝါဒီ / Agnostic ခဲ့ကြသည် (n = ၈၅)၊ ကက်သလစ်ဘာသာဝင် (n = 31), ခရစ်ယာန် (n မွတ်စ်လင်မ် (၂၂)၊n ပရိုတက်စတင့် (၁၅)n = 12), အခြားn = ၁၀) ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်n = ၆) ဆစ်ခ်n = ၆) ဟိန္ဒူn = 2) နှင့်ဂျူး (n = 2) ။ ပါဝင်သူများ၏ဘာသာရေးနှင့် ၀ ိညာဉ်ရေးရာကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ အဆင့် ၁ သည်အရေးမပါ၊ အဆင့် ၄ တွင်အရေးပါသည်။ လူတစ် ဦး ၏ဘ ၀ တွင်ဘာသာရေး၏အရေးပါမှုသည်အနိမ့်ဆုံးဖြစ်သည် (M = 1.15, SD = ၁.၁၂) တက်ရောက်သူအများစုက၎င်းတို့သည်ဘာသာရေးကိုလုံးဝအရေးမပါဟုဆိုသည်။n = 74) ။ ၀ ိညာဉ်ရေးရာသည်အရေးပါမှုတွင်အနည်းငယ်မြင့်မားသည်M = 1.49, SD = 1.04) သင်တန်းသားများကိုအများစုနှင့်အတူဝိညာဉ်ရေးရာအတန်ငယ်အရေးကြီးသောအဖြစ်သတ်မှတ် (n = 65) ။
စားပှဲ 1 စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများတင်းစွဲလမ်းအစီအမံများနှင့်စွဲလမ်းနှင့် IP ကိုအသုံးပြုခြင်း၏အစီအမံများအတွက်နည်းလမ်း, စံသွေဖီနှင့်ပ္ပံထောက်ပံ့။ အဆိုပါ BSI-18 အပေါ်ပါဝင်သူဆိုလိုရမှတ် (12.45 ခဲ့သည်SD = 9.00) ။ ကျောင်းသားလူ ဦး ရေအတွက် BSI-18 ရှိအမှတ်ရမှတ်ကိုယခင်က ၈.၄၁ တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။SD = 7.83, n = 266) (Meijer, de Vries, & ဗန် Bruggen, 2011), အရာပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုထက်သိသိသာသာနိမ့်သည်, t(455) = 5.11, p <0.001 ။ ပါ ၀ င်သူသည် SWLS တွင်ရမှတ်များကိုဆိုလိုသည် (M = 24.17, SD = 4.52) သည်စီးပွားရေးအရဖွံ့ဖြိုးပြီးဒေသများတွင်နေထိုင်သောတစ် ဦး ချင်းစီ၏ပျမ်းမျှ 20 မှ 24 ကြားတွင်ရှိခဲ့သည် (Diener et al ။ , 1985) ။ ဒီအကွာအဝေးကိုအောက်တွင်သွင်းယူသောသူသင်တန်းသားများကိုရာခိုင်နှုန်း 22% ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ RAS များအတွက်ပါဝင်သူရမှတ်ဆိုလို (M = 29.91, SD = 4.52) အထက်ပျမ်းမျှအကွာအဝေးရမှတ်များဖော်ပြကြသည် (M = ၂၈.၀၀) အမြင့်ဆုံးသည် ၃၅ မှတ်ဖြစ်သည်။Hendricket al ။ , 1998) ။ သင်တန်းသားများကိုသာ 6% သာ. ကြီးမြတ်တဲ့ဆကျဆံရေးဒုက္ခဆင်းရဲများနှင့်မကျေနပ်မှုများအကွာအဝေးအတွင်းသွင်းယူခဲ့ကြပါတယ်။
စားပွဲတင် 1 ။ နည်းလမ်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာအပေါ်ရမှတ်များ, စွဲသိုလှောင်မှု, IP ကိုစွဲလမ်းအစီအမံများနှင့်များတွင်ပြသ IP.Gender ကွဲပြားခြားနားမှုထိတွေ့များအတွက်စံသွေဖည် t တန်ဖိုးများကို
စုစုပေါင်း (N = ၂၀191)
အထီး (n = ၂၀86)
အမျိုးသမီး (n = ၂၀105)
BSI-18 12.45 (9.00) 11.66 (10.70) 13.09 (11.70) 0.869 0.00 46.00
SWLS 24.17 (4.52) 23.07 (6.76) 25.08 (5.56) 0.225 8.00 35.00
RAS1 29.92 (4.52) 30.05a (6.00) 29.83b (3.34) 0.199 13.00 35.00
နားထောင်ခြင်း 4.90 (4.78) 5.45 (5.54) 4.44 (4.02) 1.465 0.00 27.00
CUDIT-R ကို 2.13 (3.76) 3.02 (4.65) 1.39 (2.64) 2.798* 0.00 23.00
PGSI 0.34 (0.89) 0.53 (1.10) 0.18 (0.62) 3.050* 0.00 5.00
GAIA 14.14 (17.39) 23.95 (19.05) 6.10 (10.53) 8.200** 0.00 82.00
အိုင်ပီ-CRIT 7.41 (8.04) 11.60 (8.76) 3.98 (5.39) 7.376** 0.00 32.00
CPUI-comp 11.28 (8.64) 16.35 (9.28) 7.12 (5.21) 8.658** 0.00 39.00
ပထမဦးဆုံးထိတွေ့မှု၏ခေတ် 13.95 (3.00) 12.78 (1.92) 15.10 (3.42) 5.457** 7.00 32.00
ထိတွေ့မှုစုစုပေါင်းအနှစ် 7.24 (3.67) 8.60 (3.42) 5.90 (3.42) 5.144** 0.00 19.00
IP ကိုအသုံးပြု frequency (အဆ / လ) 7.68 (9.82) 14.73 (10.66) 1.90 (2.92) 11.819** 0.00 34.00
(မိ၌) IP ကို ​​session တစ်ခုနှုန်းသုံးစွဲအချိန် 14.97 (15.87) 17.31 (13.05) 13.05 (16.19) 1.856 0.00 63.00
IP ကိုပမာဏ (session တစ်ခုနှုန်းဖိုင်များ) 4.72 (8.72) 6.78 (9.43) 3.03 (7.73) 3.016* 0.00 61.00
မှတ်စု။ BSI-18 အကျဉ်းချုပ်ရောဂါလက္ခဏာတွေ Inventory =; SWLS = ဘဝကစကေးနှင့်အတူကျေနပ်မှု; RAS = ဆက်ဆံရေးအကဲဖြတ်စကေး; စာရင်းစစ် = အရက်အသုံးပြုမှု Disorders သတ်မှတ်ခြင်းစမ်းသပ်ခြင်း; CUDIT-R = ဆေးခြောက်အသုံးပြုမှု Disorders သတ်မှတ်ခြင်းစမ်းသပ်ခြင်း - Revised; PGSI = ပြဿနာလောင်းကစား Severity Index; အရွယ်ရောက်ပြီးသူအဘို့ GAIA = ဂိမ်းစွဲမှု Inventory; အိုင်ပီ-CRIT = DSM-5 အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းစွဲသတ်မှတ်ချက်အဆင်ပြေအောင်; CPUI-comp = ဆိုက်ဘာ-ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု Inventory -Compulsion တိုင်း။
1n = 67 ။ an = 26 ။ bn = 41 ။
*p <.01 ။ **p <.001
စားပှဲ 1 နည်းလမ်းနှင့်အစွဲအစီအမံအပေါ်ရမှတ်များအတွက်စံသွေဖီပေးပါသည်။ အဆိုပါစာရင်းစစ်ဘို့ပါဝင်သူရမှတ်များခဲ့သည်ကိုဆိုလိုတာ M = 4.90 (SD = 4.78) နှင့်ပြtheနာအကွာအဝေးတွင်ပါဝင်သူရာခိုင်နှုန်း 25% ရှိခဲ့သည်။ CUDIT-R အတွက်M = 2.13, SD = 3.76), 2% သာသင်တန်းသားများကိုပြproblemနာဆေးခြောက်အသုံးပြုမှုများအတွက်စံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ PGSI ပေါ်ရမှတ်များM = 0.34, SD အနည်းဆုံးတက်ရောက်သူအနည်းငယ်သာ (၉%) သည်လောင်းကစားဝိုင်းတွင်သာပြသခဲ့ကြသည်။ ပြparticipantsနာရှိသည့်လောင်းကစားခြင်းအတွက်မည်သူပါဝင်သည်ကိုသတ်မှတ်ခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ ပါဝင်သူ ၃ ရာခိုင်နှုန်းသာအလယ်အလတ်လောင်းကစားခြင်းသတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည် ။GAIA ဆိုလိုသည်မှာ ၁၄.၁၄ ဖြစ်သည်။SD (၁၇.၃၉)၊ ၁၃% သည်ပျမ်းမျှအလယ်အလတ်နှင့် ၂၀% တွင်ပြproblemsနာများနှင့်ပြိုလဲသွားသည်။
IP ကိုမှပထမဦးဆုံးထိတွေ့မှု၏အသက်အရွယ်အထီးအဘို့အ 12.78 နှစ်ပေါင်းခဲ့ဆိုလို (SD = 1.92) နှင့် 15.10 နှစ် (SD အမျိုးသမီးများအတွက် = 3.42) ။ IP အသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေအရအထီးနှင့်အမများသိသိသာသာကွဲပြားကြသည် differe2(6) = 8.87, p <0.001 ။ အမျိုးသမီးများအတွက် 46% (n = 48) တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအတွက် IP ကိုမသုံးခဲ့ဘူး၊ 23% (n = 24) လစဉ်ထက်လျော့နည်းအသုံးပြု, 11% (n = 12) တစ်လလျှင်တစ်ကြိမ်, 11% (n = ၁၁) တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီး ၁၀% (n တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် = 10) ။ အထီးအဘို့, 5% (n = 4) သူတို့သည်တစ်ကိုယ်ရည်ရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကို IP လုံးဝအသုံးမပြုကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်၊ ၆% (n အိုင်ပီကိုလစဉ်ထက်နည်းသောအသုံးပြုသောအမျိုးသားများအနက် ၈% (= ၅)n = ၇) တစ်လလျှင် IP အသုံးပြုမှု ၁၂% (n = ၁၁) တစ်ပတ်လျှင် IP ကို ​​၃၆%၊n = ၃၁) တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအတွက်တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်ထက်ပိုသော IP ကိုအသုံးပြုခဲ့သည် 27% (n = ၂၄) IP ကိုနေ့စဉ်သုံးပြီး ၅% (n = ၄) သူတို့သည်တစ်ကိုယ်ရည်ရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုတစ်ရက်နှစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသော IP ကိုအသုံးပြုနေကြောင်းဖော်ပြသည်။
ဖော်ပြရန်အကြောင်းအရာအလိုက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ 84 ယောက်ျားနှင့် 86 အမျိုးသမီးသင်တန်းသားများ၏ IP ကိုမှပထမဦးဆုံးထိတွေ့မှုများ၏တိကျမ်းစာ၌လာသည်ဖော်ပြချက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ တုံ့ပြန်မှုများ၏အများစု (57%) ပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂလိကရှိနေစဉ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ပျူတာပေါ်မှာ IP ကိုရှာဖွေခြင်းဖြင့် IP ကိုထိတွေ့ခံတော်မူပြီးမှဖော်ပြခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးထိတွေ့မှု၏ပါဝင်သူဖော်ပြချက်မှာတွေ့ရတဲ့ငါးအသုံးအများဆုံး themes များမှော / ရှုပ်ထွေးမှုများ (34%), စိတ်လှုပ်ရှားမှု (24%), အပြစ်ရှိတယ် / အကျင့်ယိုယွင်း (15%) ၏ခံစားချက်များကိုအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သိချင်စိတ်၏ခံစားချက်များကို (14%), ရှိ. , နောက်ဆုံးတော့ arousal (11%) ။
အတွေ့အကြုံရညျအသှေးအဘို့အ coding အပြုသဘောသို့မဟုတ်အပျက်သဘော connotation ၏ဘာသာစကားပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သော "ခံစား" သို့မဟုတ် "အပျြောအပါး" အပြုသဘောအဖြစ် coded ခဲ့ပါတယ်, ဒီလို "မသက်မသာ" သို့မဟုတ် "စုစုပေါင်း" အဖြစ်ဘာသာစကားအနုတ်လက္ခဏာအဖြစ် coded ခံခဲ့ရသည်။ အဖြစ်ဘာသာစကား တုံ့ပြန်ချက်ရောနှောအဖြစ်အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောဘာသာစကား၏တန်းတူပမာဏအသုံးပြုခဲ့ကြသည်လျှင် coded ခဲ့ကြသည်သို့မဟုတ်အသုံးပြုသောဘာသာစကားရန်မရှင်းလင်းသော connotation ဖော်ထုတ်နိုင်လျှင်။ ယောက်ျားအများစုနေတဲ့အနုတ်လက္ခဏာအတွေ့အကြုံကိုဖော်ပြအထီးတုံ့ပြန်မှု၏ 35% နှင့်အတူတစ်ဦးအပြုသဘောအတှေ့အကွုံ (အထီးတုံ့ပြန်မှု၏ 11%) အဖြစ် IP ကိုမှသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးထိတွေ့ rated နှင့် 24% ဟာရောထွေးအတွေ့အကြုံကိုဖော်ပြ။ အမျိုးသမီးအမျိုးသမီးတစ်ဦးအပြုသဘောအတွေ့အကြုံကိုဖော်ပြတုံ့ပြန်မှုနှင့်ရောထွေးအတွေ့အကြုံကိုဖော်ပြတုံ့ပြန်မှု၏ 34% ၏ 20% နှင့်အတူ, (တုံ့ပြန်မှု၏ 26%) အမျိုးသားများထက် ပို. အနုတ်လက္ခဏာအတွေ့အကြုံများရှိခဲ့သညျ။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းဘို့အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောအတွေ့အကြုံများအကြားခြားနားချက်များ, χသိသိသာသာခဲ့ကြသည်2(2) = 13.04, p <0.005, ယောက်ျားများသည်အမျိုးသမီးများထက်၎င်းတို့၏ပထမဆုံးထိတွေ့မှုကိုအပြုသဘောဆောင်သောအတွေ့အကြုံအဖြစ်သတ်မှတ်ရန်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိခြင်းနှင့်အတူ။ အမျိုးသမီးပါ ၀ င်သူ ၆ ဦး က IP ကိုသိသာထင်ရှားသည့်အခြားတစ်ခုမှတဆင့်ပထမဆုံးအကြိမ်ထိတွေ့ဖူးကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပြီးအများစုမှာအပျက်သဘောအတွေ့အကြုံများဖြစ်သည်။ အပြုသဘောဆောင်သောအတွေ့အကြုံများရှိသောအမျိုးသမီးများစွာသည်လိင်မှုနှိုးဆွမှုအတွေ့အကြုံကိုမတွေ့ရှိခဲ့ကြပြီးထိုအတွေ့အကြုံကိုအပန်းဖြေခြင်း (သို့) ဟာသတစ်ခုအဖြစ် (အမျိုးသမီးများ၏အပြုသဘောဆောင်သောအတွေ့အကြုံများ၏ ၄၁%) ကဖော်ပြခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်အမျိုးသားအများစုသည် IP ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိရှာဖွေခဲ့ကြသည် (41%)၊ မတော်တဆကြည့်ခြင်း (73%) နှင့်မတူဘဲ အမျိုးသမီးပါ ၀ င်သူအများစုက IP သည်သတိလစ်မိသွားခြင်း (သို့) ၄ င်းတို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်မပါဘဲမိတ်ဆက်ခြင်းခံရသည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည် (တုံ့ပြန်မှု ၃၇%) ။ ပထမထိတွေ့မှုအတွေ့အကြုံ၏အရည်အသွေးသည်နောက်ပိုင်းတွင်အိုင်ပီကြိမ်နှုန်းနှင့်အသုံးပြုမှုပမာဏနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိကြောင်းနှင့် IP စွဲလမ်းမှုအတိုင်းအတာအပေါ်ပိုမိုမြင့်မားသောရမှတ်များနှင့်ပထမ ဦး ဆုံးထိတွေ့မှုအရည်အသွေးနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
အဆိုပါ t ပါဝင်သူအသက်အပိုင်းအခြားနှင့် IP အသုံးပြုမှုအတွက်စမ်းသပ်မှုများ (အိုင်ပီ၏ကြိမ်နှုန်းတစ်ခုတည်းသင်တန်းသားများကိုများအတွက်တစ်လလျှင်အသုံးပြုတွေ့ရှိခဲ့M = 9.07, SD = 10.50) ဆက်ဆံရေးအတွက်ပါဝင်သူများအတွက် IP ကိုအသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေထက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားခဲ့သည် (M = 6.27, SD = 8.92), t(189) = 1.99, p = 0.05 ။ The t စမ်းသပ်မှုများလည်း (တစ်ခုတည်းရှိနသောသူသင်တန်းသားများကိုများအတွက်စွဲလမ်း IP ကိုစံအပေါ်ပိုမိုမြင့်မားရမှတ်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုအတည်ပြုM = 9.16, SD = 8.50) ဆက်ဆံရေးတွင်ပါဝင်သူများအတွက်ထက်M = 5.65, SD = 7.18), t(189) = 3.08, p = 0.002 ။
IP ကိုမှပထမဦးဆုံးထိတွေ့မှု၏ခေတ် (M = 13.95, SD = 3.00) ကိုမကြာခဏနှင့်စွဲလမ်း IP ကိုအသုံးပြုမှုနှင့်အတူသိသိသာသာဆက်နွယ်နေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည် (ဇယားကိုကြည့်ပါ 2). အစောပိုင်းကအသက်မှာ IP ကိုထိတွေ့သူသင်တန်းသားများကို ( ပို. မကြာခဏ IP ကိုသုံးစွဲဖို့ကပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်r = -.27, p <0.001), ပိုရှည် IP အစည်းအဝေးများရှိသည် (r = -.16, p = 0.033), နှင့် Adapted DSM-5 အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲလမ်းသတ်မှတ်ချက်အပေါ်ပိုမိုမြင့်မားဂိုးသွင်းဖို့ပိုများပါတယ် (IP ကို-CRIT; r = -.28, p <0.001) နှင့် CPUI-COMP အစီအမံ (r = -.29, p <0.001) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့စုစုပေါင်း IP ကိုထိတွေ့မှုသိသိသာသာ IP ကိုအသုံးပြုမှုပိုမိုမြင့်မားအကြိမ်ရေဆက်နွယ်နေကြောင်းခံရဖို့ရှာတွေ့ခဲ့သည်. ကြာကြာ IP ကိုမှစုစုပေါင်းထိတွေ့ခဲ့သူကိုသင်တန်းသားများကိုလည်းတစ်လလျှင်ပိုပြီးအိုင်ပီအစည်းအဝေးများရှိသည်ဖို့ကပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည် (r = .25, p = 0.003) ။
စားပွဲတင်2။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာ, စွဲလမ်း, နှင့် IP ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် IP စွဲ၏အစီအမံဆက်နွယ်နေကြောင်း IP ကိုထိတွေ့၏ဆောင်ရွက်ချက်များ
စားပွဲတင်2။ IP ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် IP ကိုစွဲလမ်း၏အစီအမံဆက်နွယ်နေကြောင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာ, စွဲလမ်းနှင့်ထိတွေ့မှု toIP ၏ဆောင်ရွက်ချက်များ
IP ကိုအသုံးပြု frequency
BSI-18 0.060 0.086 0.112 0.255*** 0.250***
SWLS -0.137 -0.063 -0.155* -0.318*** -0.362***
RAS (n = ၂၀67) 0.038 -0.153 -0.179 -0.263* -0.316**
နားထောင်ခြင်း 0.190** 0.150* -0.026 0.049 0.033
CUDIT-R ကို 0.203** 0.089 0.019 0.125 0.060
PGSI 0.180* 0.030 0.071 0.217** 0.242**
GAIA 0.459*** 0.189** 0.281*** 0.403*** 0.435***
ပထမဆုံး IP ကိုထိတွေ့မှု၏ခေတ် -0.267*** -0.163* -0.033 -0.282*** -0.292***
IP ကိုမှစုစုပေါင်းထိတွေ့မှု 0.281*** 0.161* 0.143 0.168* 0.204**
မှတ်စု။ BSI-18 အကျဉ်းချုပ်ရောဂါလက္ခဏာတွေ Inventory =; SWLS = ဘဝစကေးနှင့်အတူစိတ်ကျေနပ်မှု; RAS = ကြားဆက်ဆံရေးအကဲဖြတ်စကေး; စာရင်းစစ် = အရက်အသုံးပြုမှုမမှန်ဖော်ထုတ်ခြင်းစမ်းသပ်; CUDIT-R ကိုဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်းမမှန်မှုများဖော်ထုတ်ခြင်းစမ်းသပ် = - ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော; PGSI = ပြဿနာလောင်းကစားဝိုင်းပြင်းထန်မှုအညွှန်းကိန်း; အရွယ်ရောက်ပြီးသူအဘို့ GAIA = ဂိမ်းစွဲမှု Inventory; အိုင်ပီ-CRIT = DSM-5 အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းစွဲသတ်မှတ်ချက်အဆင်ပြေအောင်; CPUI-comp = ဆိုက်ဘာ-ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုစာရင်း - မလှူတိုင်းတာ။
စားပှဲ2BSI-18, SWLS နှင့် RAS ရမှတ်များနှင့် IP ကိုအသုံးပြုခြင်းအကြား Pearson ဆက်စပ်ပေးသည်။ ယေဘုယျအား IP ကိုအသုံးပြုမှုကိုသူနှင့်ဆင်းရဲသောသူတို့သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများအစီရင်ခံစာများအကြားတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းမရှိအသင်းအဖွဲ့မှအနည်းငယ်မျှသာရှိ၏။ Tဤနေရာတွင် IP ကိုအသုံးပြုဘဝကိုကျေနပ်အားရမှုနှင့်ငွေပမာဏကိုအကြားတွေ့ရှိရသေးငယ်တဲ့ဒါပေမဲ့သိသိသာသာနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သောဆက်စပ်မှုခဲ့သည် (r = -.15, p = 0.04) ။ အိုင်ပီ / session ရဲ့မြင့်မားတဲ့အသံအတိုးအကျယ်ကိုအသုံးပြုတဲ့သူသင်တန်းသားများကိုအခြားသူများထက်နိမ့်သူတို့ရဲ့ဘဝကိုကျေနပ်အားရမှုဘယ်လောက်ရှိသလဲပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိကြ၏။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာအပေါ်အစီရင်ခံစာများ IP ကိုစွဲလမ်းစံနှုန်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လည်းခဲ့ကြသည် (ဇယားကိုကြည့်ပါ 2) ။ သိသာထင်ရှားသောဆက်စပ်မှု (အိုင်ပီ-CRIT နှင့် BSI-18 ရမှတ်များအကြားတွေ့ရှိခဲ့သည်r = .26, p <0.001) နှင့် LSS ရမှတ်များr = -.32, p <0.001) ။ သူတို့စွဲလမ်း IP ကိုအသုံးပြုရောဂါလက္ခဏာတွေကဖော်ပြခဲ့သည်လျှင်သင်တန်းသားများကိုအဆင့်မြင့်ယေဘုယျစိုးရိမ်သောကနှင့်ဒုက္ခဆင်းရဲအဖြစ်နိမ့်ဘဝကျေနပ်မှုရှိသည်ဖို့ကပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်။ စွဲလမ်းစေ IP ကိုအသုံးပြုမှုကိုလည်း RAS နဲ့အသေးစားပေမယ့်သိသာထင်ရှားသောနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သောဆက်စပ်မှုရှိခဲ့ (r = -.26, p = 0.03) ။ အိုင်ပီ၏ compulsive အသုံးပြုမှု CPUI အတိုင်းအတာကိုလည်းသိသိသာသာ BSI-18 အပေါ်ပိုမိုမြင့်မားရမှတ်ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည် (r = .25, p <0.001), အဆိုပါ SWLS အပေါ်တစ်ဦးအနိမ့်ရမှတ် (r = -.36, p <0.001) တစ် ဦးအောက်ပိုင်း RAS ရမှတ်များရှိသည်ဖို့ ND အနည်းငယ်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ် (r = -.32, p = 0.009) ။ IP ကိုမှစွဲလမ်းလိုလားသောဆက်ဆံရေးရှိခြင်းအဖြစ်ဖော်ထုတ်သူကိုသင်တန်းသားများကိုရောက်သောပိုမိုမြင့်မားယေဘုယျအဆင့်ဆင့်နှင့်ဘဝကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှု၏အောက်ပိုင်းအဆင့်ဆင့်ပြသသည်။
အရက် (စာရင်းစစ်), ဆေးခြောက် (CUDIT-R), ပြဿနာလောင်းကစားဝိုင်း (PGSI), နှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်း (GAIA): Pearson ဆက်စပ်မှုစွဲ၏အခြားအစီအမံတွေနဲ့အိုင်ပီအသုံးပြုခြင်းနှင့် IP ကိုစွဲနှိုင်းယှဉ်ဖို့တွက်ချက်ခဲ့ကြသည်။ သိသာထင်ရှားသောဆက်စပ်မှု IP ကိုအသုံးပြုအကြိမ်ရေအပေါင်းတို့နှင့်လေးစွဲအစီအမံ (ဇယားကိုကြည့်ပါအကြားတွေ့ရှိခဲ့သည် 2).
အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင် IP ကိုအသုံးပြုမှုကိုတစ်ခုံတည်ရှိခြင်းရှိမရှိအကဲဖြတ်ဖို့, sequential polynomial ဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ IP ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများအကြားဆက်ဆံရေး၏သဘောသဘာဝစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နှင့် curvilinear ဆက်ဆံရေးမျိုးကိုသိရှိနိုင်ဖို့, နှုန်းအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည် Wuensch (2014)။ စားပွဲတင်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း 3မရှိသိသိသာသာဆက်ဆံရေးဟာ BSI-18, အ SWLS ဒါမှမဟုတ် RAS နှင့်အတူတွေ့ရှိခဲ့သည်။ IP ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများအကြားဆက်ဆံရေး curvilinear ဖြစ်ပေါ်လာပါဘူး, ဒါကြောင့်, အန္တရာယ် IP ကိုအသုံးပြုမှုကိုအဘယ်သူမျှမခုံ identified.However ဖြစ်နိုင်ပါတယ်, IP ကို-CRIT နှင့်အတူတွေ့ရှိရသိသာ curvilinear ဆက်ဆံရေး (ရှိခဲ့r = .39, p <0.001) နှင့် CPUI-COMP (r = .40, p <0.001) အိုင်ပီအသုံးပြုမှု (ပုံကိုကြည့်ပါ 1 နှင့် 2). အစပိုင်းမှာနှစ်ဦးစလုံးရဲ့ IP အစီအမံအပေါ်ရမှတ်သုညကနေထထိုအခါမူကား Plateau ။ စွဲလမ်းစေ IP ကိုအသုံးပြုမှုကိုစံရမှတ် 15 အိုင်ပီအစည်းအဝေးများ / လမှာ Plateau မှထင်ရှားလျက်, ~14.00 တစ်ရမှတ်မှာ. 13 အိုင်ပီအစည်းအဝေးများ / လမှာ ~18.00 တစ်ရမှတ်မှာ CPUI-မလှူ (comp) စကေးကုန်းပေါ်ရမှတ်များ။ အစည်းအဝေးများတစ်နေ့တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးဖြစ်ပေါ်သည့်အခါသို့သော်ဤရမှတ်များသိသိသာသာတစ်ဦးအပြုသဘောအရှိန်မြှင့်ကွေးအတွက်နောက်တဖန်မထ။ အိုင်ပီ၏နေ့စဉ်သို့မဟုတ် သာ. ကြီးမြတ်အသုံးပြုမှုမှာ IP ကိုစွဲလမ်းအစီအမံများ၏ရမှတ်များအတွက်သိသာတိုးလည်းမရှိ။
ပုံ 1 ။ IP ကိုအသုံးပြုအကြိမ်ရေနှင့် DSM-5 ထံမှအဆင်ပြေအောင်စွဲလမ်း IP ကိုစံများအကြား Curvilinear ကြားဆက်ဆံရေး။ အကောင်းဆုံးမထိုက်မတန်၏လိုင်း 15 အစည်းအဝေးများ / လပေမယ့်တိုး၏တစ်ဦးအသုံးပြုခြင်းမှာ IP ကိုကုန်းပြင်၏ addictiveuse သင်တန်းသားများကိုတစ်နေ့တစ်ကြိမ် IP ကို ​​အသုံးပြု. စတင်တစ်ချိန်ကကြောင်းအကြံပြု
ပုံ2။ IP ကိုအသုံးပြုအကြိမ်ရေနှင့် compulsive IP ကိုအသုံးပြုမှုများ၏ CPUI အတိုင်းအတာအကြား Curvilinear ကြားဆက်ဆံရေး။ ပုံထဲမှာအကောင်းဆုံးမထိုက်မတန်၏လိုင်းနှင့်အတူတြူမှတ်ချက် 113 အစည်းအဝေးများ / လမှာ .CPUI-comp ကုန်းပြင်ထိုအခါမူကား, သင်တန်းသားများကိုတကြိမ်သို့မဟုတ်ထို့ထက် ပို. တစ်ရက်အိုင်ပီအသုံးပြုတဲ့အခါတိုးပွါး
စားပွဲတင်3။ sequential polynomial ဆုတ်ယုတ် IP ကိုအသုံးပြုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, psychosocialfunctioning နှင့်စွဲလမ်း IP ကိုအသုံးပြုမှုအစီအမံ
IP ကိုအသုံးပြု frequency linear 0.060 -0.137 -0.038 0.536*** 0.528***
quadratic 0.057 -0.089 0.138 0.445*** 0.455***
ကုဗ 0.053 -0.060 0.185 0.385*** 0.401***
အိုင်ပီ session တစ်ခုနှုန်းသုံးစွဲအချိန် linear 0.086 -0.063 -0.153 0.389*** 0.302***
quadratic 0.075 -0.025 -0.128 0.262*** 0.188**
ကုဗ 0.063 -0.003 -0.104 0.203** 0.133
session တစ်ခုနှုန်းအိုင်ပီပမာဏ linear 0.112 -0.155* -0.179 0.333*** 0.325***
quadratic 0.115 -0.119 -0138 0.166* 0.176*
ကုဗ 0.112 -0.105 -0.120 0.115 0.124
မှတ်စု။ အိုင်ပီ = အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်း; SWLS ဘဝစကေးနှင့်အတူ = စိတ်ကျေနပ်မှု; RAS = relationshipassessment စကေး; အိုင်ပီ-CRIT = DSM-5 Internetpornography စွဲသတ်မှတ်ချက်အဆင်ပြေအောင်; CPUI-comp = ဆိုက်ဘာ-pornographyuse စာရင်း - မလှူတိုင်းတာ။
an = 67 ။
IP ကိုအသုံးပြုစွဲလမ်းအစီအမံအပေါ်ပိုမိုမြင့်မားရမှတ်အိုင်ပီ၏နေ့စဉ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုမကြာခဏအသုံးပြုခြင်းကိုဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည်။ သို့သော်ရလဒ်များကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှု, စိတ်ကျရောဂါနှင့်အသက်နှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းရဲ့အညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်ရုန်းကန်မှုများ၏ပမာဏနှင့်ကြိမ်နှုန်းအကြားမျှတိုက်ရိုက်လင့်ခ်ရှိကွောငျးကိုညွှန်ပြ. မြင့်မားသော IP ကိုစွဲရမှတ်မှသိသိသာသာဆက်စပ်အိုင်ပီ, ဗွီဒီယိုဂိမ်းများကိုမှစွဲလမ်းဖို့အစောပိုင်းပထမဦးဆုံးထိတွေ့ပါဝင်သည်နှင့်အထီးဖြစ်ခြင်း။ IP ကိုအသုံးပြုမှုအချို့ကိုအပြုသဘောသက်ရောက်မှုယခင်စာပေတွင်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြပေမယ့် (ကျယ်ပြန့်, 2002; ဆက်စပ်မှု, 1995; Hald & Malamuth, 2008; Kaufman et al ။ , 2007; Kingston & Malamuth, 2010; Koch & Schockman, 1998; McLelland, 2002; Poulsen, Busby, & Galovan, 2013), ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာအိုင်ပီ၏အလယ်အလတ်သို့မဟုတ်ပေါ့ပေါ့အသုံးပြုမှုနှင့်အတူတိုးတက်ကြောင်းညွှန်ပြကြဘူး။
Tသူက IP ကိုအသုံးပြုမှုကိုသူနှင့်ဆင်းရဲသောသူတို့သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာ (ယေဘုယျစိုးရိမ်သောကနှင့်ဒုက္ခဆင်းရဲ, အသက်ရှင်ခြင်းကိုစိတ်ကျေနပ်မှု, ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှု) အကြားတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့သိသိသာသာဆက်ဆံရေးမျိုးကိုရှာဖွေပျက်ကွက် IP ကိုအသုံးပြုခြုံငုံအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အလိုလိုသေချာပေါက်အန္တရာယ်မပေးကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ သို့သော်ပိုမိုမြင့်မား IP ကိုစွဲရမှတ်များဆင်းရဲသားတို့ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့ကြသည်။ သင်တန်းသားများကိုတကြိမ်တိုးမြှင့်စွဲလမ်းအိုင်ပီအစီအမံအပေါ်ရမှတ်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တစ်နှစ်၏ IP ကိုအသုံးပြုမှုကိုညွှန်ပြပေမယ့်ပါဝင်သူတိုင်းသည်ဒုတိယနေ့ရက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်တစ်ချိန်ကဤအရမှတ်နောက်ဆုံးမှာ plateaued။ ဤ IP မူလကပင်စွဲလမ်းကြောင်းသက်သေအထောက်အထားအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူနိုင်ပေမယ့်, ပိုမိုဖွယ်ရှိ CPUI-comp အတိုင်းအတာအတွက် IP-CRIT နှင့် ~ 14.00 များအတွက် ~ 18.00 ဤရမှတ်အပန်းဖြေ IP ကိုအသုံးပြုသူများအများ၏ရမှတ်များဘာတွေလုပ်နေလဲဖြစ်ပါတယ်ကြောင်း။ တစ်ဦးပါဝင်သူ IP ကို ​​အသုံးပြု. သောအခါသဘာဝကျကျ, ဒီအသုံးပြုမှုအဖြစ်စွဲလမ်းအရည်အချင်းပြည့်မှီပါဘူးရင်တောင်တစ်ခုခုကိုအတိုင်းအတာအပေါ်လေ့လာသူအချို့ကရမှတ်ရှိပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့သင်တန်းသားများကိုတစ်ရက်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုတစ်ကြိမ် IP ကို ​​အသုံးပြု. သောအခါစွဲလမ်း IP ကိုအသုံးပြုမှုအတွက်သိသာထင်ရှားသောပြောင်းလဲမှုကိုမြင်ရပြုလေ၏။ ဒီကြိမ်နှုန်းအထက်, စွဲလမ်း၏ရမှတ်များအတွက်တစ်ဦးတိုးလည်းမရှိ။ ဒီပုံစံဆင်းရဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ဆက်နွယ်သောအိုင်ပီ, ၏စွဲလမ်းအသုံးပြုခြင်းကိုအကြံပြုလိုလူတွေနေ့စဉ် IP ကိုသုံးစွဲဖို့စတင်တဲ့အခါမှသာပေါ်ထွက်လာ။ IP ကိုအသုံးပြုမှုများစွဲလမ်းအစီအမံကနေဒေတာတွေကို Self-အစီရင်ခံစာအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့ကြသည်အဖြစ်သို့သော်, ဤသည်လည်းဆင်းရဲသားကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကသူတို့ရဲ့အသုံးပြုမှုပြဿနာသို့မဟုတ်စွဲလမ်းကြောင်းခံစားရတဲ့အခါမှသာမကြာခဏ IP ကိုအသုံးပြုမှုနှင့်အတူတိုက်ဆိုင်စေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။ အဆိုပါလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း '' ဒုက္ခဆင်းရဲအိုင်ပီ၏နေ့စဉ်သုံးစွဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့သို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီ၏ရောင်ပြန်ဖြစ်ပါတယ် '' မသိရသေးဖြစ်ပါတယ်စွဲခံရသူတို့၏သံသယမှတုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်။
အသုံးပြုခြင်းနှင့်စွဲလမ်း၏အဆင့်ကိုအကြားတစ်ဦးနှင့်ဆင်တူဂုဏ်ထူး (ဗီဒီယိုလောင်းကစားစွဲစာပေအစီရင်ခံထားသည်Charlton & Danforth, 2007, 2010; Wong & Hodgins, 2013) ။ ခိုင်မာတဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုစွဲသို့မဟုတ်ပြဿနာကစားများအတွက်လိုအပ်သောအခွအေနေပေမယ့်ခိုင်မာတဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုစွဲနှင့်အတူပြောရလျှင်တော့မဟုတ်ပါဘူး။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုပြဿနာ IP ကိုအသုံးပြုရန်မှာအန္တရာယ်အရှိဆုံးဖြစ်ကြောင်းလူဦးရေအနေနဲ့အစောပိုင်းအသက်အရွယ်မှာ IP ကိုထိတွေ့သူတစ်ခုတည်းအထီးဖြစ်ကြောင်းအကြံပြု။ မကြာခဏဆင်းရဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ functioning.These ပြဿနာများဆက်စပ်အဖြစ်သုတေသနအတွက်ကိုးကားနေသည် IP ကိုစောစောပထမဦးဆုံးထိတွေ့မှုနောက်ပိုင်းနှစ်များတွင်တိုးမြှင့်ဆိုးသွမ်းအပြုအမူနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုကိုပါဝင်နိုင်ပါသည် (Ybarra & Mitchell က, 2005မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်), အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကို (Sinković, Štulhofer, & Božić, 2013လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များအတွက်), နှင့်တိုးမြှင့် propensity (ရေလွှမ်းမိုးခြင်း, 2009) ။ တစ်ဦး addendum, ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်ကောင်းပင်အစားထိုးအဖြစ် IP ကို ​​အသုံးပြု. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေးများအတွက်လိင်နှင့်လိင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အယူအဆမှားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လူငယျမြားအတှကျအလားအလာဖန်တီးပေးပါတယ်။ ဒီအစောပိုင်းစတင်ခြင်းအသက်အရွယ်အုပ်စုတစ်စုနောက်ထပ်လေ့လာမှုကဒီစိတ်ကူးအပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များပေးလိမ့်မယ်။
ယောက်ျားကဒီလေ့လာမှုမှာမြင်သာထင်သာ IP ကိုအသုံးပြုသူများသည်တို့စွဲလမ်းက IP ကိုအသုံးပြုခြင်းရှိခြင်းအဖြစ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ပေးဖို့အရှိဆုံးဖွယ်ရှိ။ အဆိုပါတွေ့ရှိချက်လက်ရှိစာပေနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ဒီအမြိုးသမီးမြားကို IP ၏စွဲလမ်းအသုံးပြုခြင်းကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲများအတွက်အန္တရာယ်မှာမဟုတ်ပေမယ့်ယောက်ျားတစ်ဦးပိုပြီးကျရောက်နေတဲ့လူဦးရေဖြစ်ပေါ်လာကြောင်းပြောပါသည်မဟုတ်။ အထီးညစ်ညမ်းဒါဖြားယောင်းရှာတွေ့ဘာကြောင့်အချို့သော (တစ်ဦးရှင်းပြချက်အဘို့အဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်မှထောက်ပြခဲ့ကြVasey & Abild 2013; Wilson က, 1997, 2014)။ အဆိုပါပျံ့နှံ့နေတဲ့ (မကြာခဏ intuited) အမြင်ရှိသောယောက်ျား "Hard-ကြိုး" ဒီပုံဟာသူတို့ရဲ့မျိုးရိုးဗီဇအပေါ်သွားအထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုသည်အတိုင်း, ဝတ္ထုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များ၏ကြီးမားသောနံပါတ်များကိုပိုနှစ်သက်ဖို့ဖြစ်ပြောင်းလဲသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဒီရှင်းပြချက်က၎င်း၏တန်ရာရှိပါတယ်နေစဉ်, ကယောက်ျားဒီ preference ကိုပြ၎င်းတို့၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အတိတ်အားဖြင့် preordained သောယူဆချက်ကိုမှန်ကန်စေသည်။ ဤသည်နှင့်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်စိတ်ပညာ၌ကျိန်းဝပ်များစွာသောအခြားယူဆချက် (မိမိတို့၏န့်အသတ်ရှိသည်နှင့်လူ့အပြုအမူနှင့် ပတ်သက်. အထင်အမြင်လွဲမှားမှုများကိုဖန်တီးနိုင်သည်Confer et al ။ , 2010) ။ အမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ခေတ်သစ်သဘောထားများနှင့်စံချိန်စံညွှန်းကိုပြုသော်လည်းအဘယ်အရာကိုပိုမိုဖွယ်ရှိသည် (ခေတ်သစ်ပြည်သူ့သဘောထားတွေနဲ့အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုလက်ခံစံချိန်စံညွှန်းအိုင်ပီအဘို့ဤ preference ကိုရှည်ကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးMalamuth, 1996) ။ သုတေသန (အိုင်ပီကိုအသုံးပြုဖို့သူအနှစ်ဦးစလုံးလေ့လာခြင်းအကြောင်းအရာပေါ်မူတည်ပြီးအညီအမျှခံစားကြောင်းပြသထားပါတယ်Ciclitira, 2004; Poulsen, Busby, & Galovan, 2013) ။ အိုင်ပီ၏အထီးအသုံးပြုမှုကိုရိုးရှင်းစွာပိုပြီးလူမှုရေးအရလက်ခံနိုင်ဖွယ်ကြောင့်အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှု၌အမျိုးသမီးအဘို့ဖြစ်၏ထက်ဖြစ်နိုင်သည်။
အိုင်ပီ၏စွဲလမ်းအသုံးပြုခြင်းကိုအတန်အသင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းစွဲလမ်းဆက်နွယ်နေကြောင်းခံရဖို့ပုံရသည်။ အဲဒီနှစျခုစှဲအကြားခိုင်မာတဲ့တူညီရှိပါတယ်အဖြစ်ဤသေချာပေါက်အံ့သြစရာဖြစ်သင့်ပါဘူး။ နှစ်ဦးစလုံးကွန်ပျူတာနှင့်အင်တာနက်ကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးချနှင့်အလတ်စားဝင်ရောက်နှင့်အတူအပြန်အလှန်ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်စေကြောင်းလမ်းနီးပါးအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင်များစွာသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်ခေါ်ဆောင်သွားဗီဒီယိုဂိမ်း (ဥပမာ, အရိုး Craft, အပန်းဖြေ Suit Larry က) မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းနေသူများကဖန်တီးခဲ့ကြနှင့်သူတို့၏ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာနေသည်။ တောင်မှစီးပွားဖြစ်ဗီဒီယိုဂိမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ (ဥပမာစစ်ပွဲ၏ဘုရားသခငျ, အဆိုပါ Witcher, Grand Theft Auto) ၏တိုးမြှင့်အဆင့်ဆင့်ကိုပြသနိုင်ဖို့စတင်နေကြသည်။
အဲဒီနှစျခုနတ်ကတော်များ၏တူညီပေးထားသောကြောင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းနှင့် IP မှစွဲလမ်းတစ်ဦးချင်းစီကတခြားအားဖြည့်နိုင်မယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးနတ်ကတော်မကြာခဏလူမှုရေးအဆက်အသွယ်များအတွက်အစားထိုးအဖြစ်အသုံးပြုနေကြသည်အဖြစ်ပြဿနာ IP ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပြဿနာဗီဒီယိုဂိမ်းအသုံးပြုမှုကိုနှစ်ဦးစလုံးအတန်အသင့်, အထီးကျန်မှုတွေနဲ့အထီးကျန်အစီရင်ခံစာများဆက်နွယ်နေကြောင်းနေကြတယ် (Ng & Wiemer-Hastings, 2005; Yoder, Virden, & Amin, 2005) ။ ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီကိုပုံမှန်လူမှုရေးအဆက်အသွယ်ခံယူ, ပြီးတော့ဗီဒီယိုဂိမ်းနှင့် IP နှင့်အတူလူမှုရေးအဆက်အသွယ်၏မရှိခြင်း substitutes မတစ်ဦး harmfulcycle ဖန်တီးလိမ့်မည်။ ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးကဒီသံသရာမှအထူးသဖြင့်ကျရောက်နေတဲ့ပါလိမ့်မယ် (Jansz, 2005; Sabina et al ။ , 2008), အဲဒီနှစျခုစှဲအကြားဆက်သွယ်မှုသို့နှင့်နောက်ထပ်သုတေသနဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဖှံ့ဖွိုးတိုးတကာလအတွင်းအကြောင်းတရားများမှာ-အန္တရာယ်အချက်များ elucidate လိမ့်မည်။
အားလုံးပါဝင်သူတုံ့ပြန်မှု Self-အစီရင်ခံစာအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာအချို့သင်တန်းသားများကြောင့်မေးခွန်းများကို၏ထိခိုက်မခံတဲ့သဘာမှလိမ်ညာခဲ့ကြခြင်းအလိုငှါဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါဟာအချို့သင်တန်းသားများကိုတုံ့ပြန်သည့်အခါ (ဥပမာ, သူတို့ရဲ့ IP ကိုအသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံခဲ့ထက် သာ. ကြီးမြတ်ကြီး) ချဲ့ကားပြောဆိုမှုများ, ဒါမှမဟုတ်မှားယွင်းစွာ၎င်းတို့၏အပြုအမူခန့်မှန်းကြောင်းလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ လူမှုလိုလားကိုလည်းသင်တန်းသားများမေးခွန်းလွှာဖြေကြားပုံကိုတစ်ဦးကြီးမားသောအခန်းကဏ္ဍကစားကြပေမည်။ အဆိုပါတိုင်းတာမှုများပြီးပါကလာသောအခါသင်တန်းသားများကိုပုဂ္ဂလိကကွန်ပျူတာများနှင့်အတူပေးအပ်ခဲ့သျောလညျးအခြို့သောတိကျမှန်ကန်တုံ့ပြန်မှုပေးစေခြင်းငှါလည်းရှက်ဖူးကြပေမည်။ အခြားသူများက IP ကိုစွဲလမ်း၏သီအိုရီ၏ကြိုတင်အသိပညာရှိခဲ့နှင့်ဤသီအိုရီကိုသက်သေပြဖို့ငြင်းဆန်ချင်ခဲ့ကြပေမည်။ ထို့အပြင်စိတ်ပညာသင်တန်းများယူပြီးကျောင်းသားစုဆောင်းမှုတုံ့ပြန်မှုထိခိုက်ကြပေမည်။ တချို့ကသင်တန်းသားများကိုကြိုတင်ထိတွေ့သို့မဟုတ်ထည့်သွင်းချိန်ခွင်၏အသိပညာခဲ့ကြပေမည်။ သည်အခြားကျောင်းသားလူဦးရေ, ဒါမှမဟုတ်ဆက်ဆက်ပညာရှင်များပြင်ပလူဦးရေထမ်းခေါ်ယူမှု, အထွေထွေလူဦးရေရဲ့ထက်ပိုကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီလေ့လာမှုမှာ IP ကိုစွဲလမ်းသည် CPUI-comp အတိုင်းအတာ, အ GAIA နှင့်, DSM-5 ထံမှအဆင်ပြေအောင်ခဲ့ပြီးသောထို့အပြင် IP ကိုစံ, အကဲဖြတ်ရန်အသုံးပြုတဲ့အကြေးခွံ, ဆေးခန်းသက်ဆိုင်ရာမြင့်တက်ညွှန်ပြမှဖြတ်အချက်များကိုအတည်ပြုမရှိခြင်း။ ဒါကြောင့်ထိုအဆောင်ရွက်မှုများအပေါ်အခြေခံပြီးအိုင်ပီသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုဂိမ်းအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်အသုံးပြုမှုကိုနှိုင်းယှဉ်ပျမ်းမျှအားအသုံးပြုမှုအဖြစ်ဖွဲ့စည်းသောအရာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး။
ဒီလေ့လာမှုဟာဆက်စပ်မှုဒီဇိုင်းကိုအသုံးချအဖြစ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့မရှိပြတ်သားတောင်းဆိုမှုများအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင် IP ကိုအသုံးပြုမှုကိုတစ်ခုံအကြောင်းကိုသို့မဟုတ်မှာ-အန္တရာယ်အချက်များကိုဖန်ဆင်းနိုင်ပါသည်။ သို့သော်ဤလေ့လာမှုကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ရလဒ်များကို IP ကိုအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးအများအပြားလူကြိုက်များတောင်းဆိုမှုများနှင့် Concepts မှအတိုက်အခံအတွက်မတ်တပ်ရပ်ကြဘူး။
ပြဿနာဗီဒီယိုဂိမ်းနှင့် IP ကိုအသုံးပြုခြင်း၏ပေါင်းစပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုသို့ထပ်မံစာမေးပွဲရှိသင့်ပါသည်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုအရွယ်ရောက်ပြီးသူဂိမ်းကစား၏ကြီးမားသောနံပါတ်၏တုံ့ပြန်မှုစုဆောင်းဒါပေမယ့်လည်းပိုမိုနီးကပ်စွာပထမဦးဆုံးထိတွေ့မှု၏ဆိုလိုအသက်အရွယ်မှအငယ်အသက်အရွယ်ကိုကြည့်ဖို့အကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်။ မြီးကောင်ပေါက်များ၏စိတ်ထဲတွင်ပေါ်ဗီဒီယိုဂိမ်းနှင့် IP ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကအလွန်အထိခိုက်မခံခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပြီး, ကျင့်ဝတ်ရယူပြဿနာကိုတင်ပြမယ်။ သို့သော်ဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးအသက်အပိုင်းအခြားတစ်ခုလေ့လာမှုဒီဇိုင်းစှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့်အလားအလာအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်အားဖြည်ဘယ်လိုပြဿနာအိုင်ပီနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းကိုအသုံးပြုခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုတိုးမြှင့်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုနေ့စဉ် IP ကိုအသုံးပြုမှုကိုဆင်းရဲသောသူကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမကတိုက်ရိုက်ဆက်စပ်မှုရှိကြောင်းပြသနေပါသည်။ တစ်ဦးချင်းစွဲလမ်း IP ကိုအသုံးပြုမှုရှိခြင်းအဖြစ်ဖော်ထုတ်တဲ့အခါမှာညံ့ဖျင်းသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာသာပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ဤ IP ကိုစှဲလမျးသူအဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုဖော်ထုတ်ဒုက္ခဆင်းရဲသူနှင့်ဆင်းရဲသောသူတို့သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာမဟုတ်ဘဲ IP ကိုသူ့ဟာသူဖြစ်ပေါ်စေသည်သောအရာကိုဖြစ်စေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။ သို့သော်စွဲလမ်းအပြုအမူဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြရန်နေ့စဉ် IP ကိုအသုံးပြုရန်အလားအလာရှိနေပါသည်။ အဲဒီနှစျခုနတ်ကတော်တခါတရံကျန်းမာလူမှုရေးအဆက်အသွယ်များအတွက်အစားထိုးအဖြစ်အသုံးပြုနေကြသည်အဖြစ်ကိုလည်းစွဲလမ်း IP ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းစွဲလမ်းနဲ့ဆက်ဆံရေးရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာအစားထိုးအချိန်ကျော်ဆင်းရဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာတစ်ခုဆိုင်တွေမှာအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင် IP ကိုမှအစောပိုင်းကထိတွေ့မှုပြဿနာအိုင်ပီ use.Adolescent ယောက်ျား၏မြင့်မားသောအန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်တစ်ဦးမှာ-အန္တရာယ်အုပ်စုတစ်စုဖြစ်များပါတယ်, ဤလူဦးရေနှင့်အတူအနာဂတ်လေ့လာမှုဒီအတည်ပြုနှင့်ပိုပြီးအသေးစိတ်မှာ-အန္တရာယ်အချက်များ elucidate နိုင်ဘူး။
CH နှင့် DH လေ့လာမှုအယူအဆနှင့်ဒီဇိုင်း, ဒေတာ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
အောက်ပါအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသင့်ရဲ့အသုံးပြုမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေရှိပါတယ်။ ရိုးရိုးသားသားနှင့်သင့် knowledge.Your အဖြေတွေကိုအကောင်းဆုံးလုံးဝအမည်မသိဖြစ်ကြသည်နှင့်မည်သည့်ဖော်ထုတ်သတင်းအချက်အလက်မှခြေရာခံမရပျနိုငျမှဖြေကြားပေးပါ။ အားလုံးအဖြေကိုပြီးခဲ့သည့် 12 လကိုကိုးကားအတွက်ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
1 ။ သင်နောက်တစ်နေ့အသုံးပွုနိုငျသောအခါအသင်ကသို့မဟုတ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအသုံးမပြုလျှင်ပင်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းစဉ်းစားအချိန်အများကြီးဖြုန်းသလား (မမှာအားလုံး / ရှားပါးသော / တစ်ခါတစ်ရံ / မကြာခဏဆိုသလို)
2 ။ ခုတ်လှဲသို့မဟုတ်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသင့်ရဲ့အသုံးပြုမှုကိုရပ်တန့်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အခါသင်နာမငြိမ်, စိတ်တို, သုန်မှုန်, အမျက်ထွက်သည်စိုးရိမ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဝမ်းနည်းခံစားရ, သို့မဟုတ်သင်အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းသုံးစွဲဖို့မတတ်နိုင်ကြသောအခါသလား? (မမှာအားလုံး / ရှားပါးသော / တစ်ခါတစ်ရံ / မကြာခဏဆိုသလို)
3 ။ သငျသညျအချိန်ပမာဏတိုးမြှင့်များအတွက်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသုံးစွဲဖို့လိုအပ်ကြောင်းခံစားရပါသလော (မမှာအားလုံး / ရှားပါးသော / တစ်ခါတစ်ရံ / မကြာခဏဆိုသလို)
4 ။ သင်အသုံးပြုခဲ့တဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ် arousal ၏တူညီသောငွေပမာဏကိုလက်ခံရရှိရန်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းပိုမိုပြင်းထန်သောသို့မဟုတ် immersive ပုံစံများကိုသုံးစွဲဖို့လိုအပ်ကြောင်းခံစားရပါသလော (မမှာအားလုံး / ရှားပါးသော / တစ်ခါတစ်ရံ / မကြာခဏဆိုသလို)
5 ။ သင်လျော့နည်းသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပွုသငျ့သညျဟုယူဆပေမယ့်သင်ကသုံးပြီးဖြုန်းအချိန်ပမာဏပေါ်ပြန်ဖြတ်နိုင်ရင်သလား? (မမှာအားလုံး / ရှားပါးသော / တစ်ခါတစ်ရံ / မကြာခဏဆိုသလို)
6 ။ သင်၌အကျိုးစီးပွားဆုံးရှုံးသို့မဟုတ်ကြောင့်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအခြားအပန်းဖြေလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက် (ဝါသနာ, မိတ်ဆွေများနှင့်အတူအစည်းအဝေးများ) ကိုလျှော့ချသလား (မမှာအားလုံး / ရှားပါးသော / တစ်ခါတစ်ရံ / မကြာခဏဆိုသလို)
7 ။ သငျသညျအခွားသူမြားနှငျ့အငွငျးပှားရှိခြင်း, သို့မဟုတ်အရေးကြီးသောတာဝန်များကိုလျစ်လျူရှုထား, ကျောင်းက / အလုပျလနှောင်းပိုင်းဖြစ်ခြင်းသိပ်ပိုက်ဆံဖြုန်း, သငျသညျထိုကဲ့သို့သောအလုံအလောက်အိပ်ပျော်ခြင်းရတဲ့မအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များ, သတိပြုမိကြသည်သော်လည်းအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသုံးစွဲဖို့ဆက်လက်ပါသလား (မမှာအားလုံး / ရှားပါးသော / တစ်ခါတစ်ရံ / မကြာခဏဆိုသလို)
8 ။ သင်လိင်စိတ်နိုးထရရှိတစ်ခုနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းသို့မဟုတ်အခက်အခဲကြုံနေရနေကြသည်သော်လည်းတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေများအတွက်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသုံးစွဲဖို့ဆက်လက်ပါသလား (မမှာအားလုံး / ရှားပါးသော / တစ်ခါတစ်ရံ / မကြာခဏဆိုသလို)
9 ။ သင်အော်ဂဇင်ရရှိတစ်ခုနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းသို့မဟုတ်အခက်အခဲကြုံနေရနေကြသည်သော်လည်းတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေများအတွက်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသုံးစွဲဖို့ဆက်လက်ပါသလား (မမှာအားလုံး / ရှားပါးသော / တစ်ခါတစ်ရံ / မကြာခဏဆိုသလို)
10 ။ သင်ကိုယ်ထင်ရှားနာကျင်မှုကြုံနေရနေကြသည်သော်လည်းတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေများအတွက်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသုံးစွဲဖို့ဆက်လက်ပါသလား (မမှာအားလုံး / ရှားပါးသော / တစ်ခါတစ်ရံ / မကြာခဏဆိုသလို)
11 ။ သင်ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုနိုင်သည်မည်မျှ သိ. မှသင်၏မိသားစုသို့မဟုတ်သူငယ်ချင်းများကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ကြိုးစားသလား? (မမှာအားလုံး / ရှားပါးသော / တစ်ခါတစ်ရံ / မကြာခဏဆိုသလို)
12 ။ သငျသညျပုဂ္ဂိုလ်ရေးပြဿနာများအကြောင်းကိုထံမှလွတ်မြောက်ရန်သို့မဟုတ်မေ့လျော့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုပါသလား (မမှာအားလုံး / ရှားပါးသော / တစ်ခါတစ်ရံ / မကြာခဏဆိုသလို)
13 ။ သငျသညျထိုကဲ့သို့သောအပြစ်ရှိတယ်, စိုးရိမ်စိတ်, အကူအညီမဲ့, ဒါမှမဟုတ်စိတ်ကျရောဂါအဖြစ်မသက်မသာခံစားခကျြကိုသက်သာရာရစေဖို့အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုပါသလား (မမှာအားလုံး / ရှားပါးသော / တစ်ခါတစ်ရံ / မကြာခဏဆိုသလို)
14 ။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းသင့်ရဲ့အသုံးပြုမှုအလားအလာသိသိသာသာဆက်ဆံရေးကို, အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ, ပညာရေးသို့မဟုတ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများကိုဆုံးရှုံးများအတွက်အန္တရာယ် add ပါသလား? (မမှာအားလုံး / ရှားပါးသော / တစ်ခါတစ်ရံ / မကြာခဏဆိုသလို)
Adamson, အက်စ်ဂျေ၊ ကေ-Lambkin၊ အက်ဖ်ဂျေ၊ ဘေကာ၊ အေအယ်လ်၊ လူဝီ၊ တီဂျေ၊ ဆေးခြောက်အလွဲသုံးစားမှု၏တိုးတက်လာသောအတိုချုပ်အတိုင်းအတာ - ဆေးခြောက်အသုံးပြုခြင်းမမှန်စစ်ဆေးခြင်းစစ်ဆေးခြင်းစစ်ဆေးခြင်း (CUDIT-R) ။ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အရက်ကိုမှီခိုခြင်း၊ ၁၁၀ (၁)၊ ၁၃၇-၁၄၃.doi: 2010 / j.drugalcdep.110 CrossRef, Medline
Attwood, အက်ဖ် (2006) ။ တက် Sexed: ယဉ်ကျေးမှု၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Theorizing ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ,9(1), 77-94 ။ Doi: 10.1177 / 1363460706053336 CrossRef
Babor, တီ, Higgins-Biddle, ဂျေ, Saunders, ဂျေ, & Monteiro, အမ် (2001) ။ မူလတန်းစောင့်ရှောက်မှုအတွက်အသုံးပြုရန်လမ်းညွှန်များ (ဒုတိယအချက်။ ) ။ ဂျီနီဗာ၊ ဆွစ်ဇာလန် - ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့။
Barrett, D. (2010) ။ Supernormal လှုံ့ဆော်မှုများ။ နယူးယောက်၊ နယူးယောက်: WW Norton & Company ။
Barrett, P. အမ် (2012) ။ porn ၏သမ္မတနိုင်ငံ။ ဘလွန်းဘာ့ဂ်စီးပွားရေးသတင်းပတ်အစီအစဉ်။ မှရယူရန် http://www.businessweek.com/printer/articles/58466-the-new-republic-of-porn
Braun, V. , & Clarke, V. (2006) ။ စိတ်ပညာအတွက်အကြောင်းအရာအလိုက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအသုံးပြုခြင်း။ စိတ်ပညာအတွက်အရည်အသွေးသုတေသန,3(2), 77-101 ။ Doi: 10.1191 / 1478088706qp063oa CrossRef
Broad, K. အယ်လ် (2002) ။ GLB + T? လိင် / လိင်လှုပ်ရှားမှုနှင့်လိင်ဆိုင်ရာစုပေါင်းဝိသေသလက္ခဏာ (က) တည်ဆောက်မှုများ။ လိင်နှင့်ကျား၊ မလေ့လာရေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်၊ ၇၊ ၂၄၁ - ၂၆၄.doi:7/ A: 241
ချာလ်တန်, ဂျေပီ, & Danforth, ဗြဲ D. (2007) ။ အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောစွဲလမ်းမှုနှင့်မြင့်မားသောထိတွေ့ဆက်ဆံမှု။ လူ့အပြုအမူအတွက်ကွန်ပျူတာများ, 23 (3), 1531-1548 ။ Doi: 10.1016 / j.chb.2005.07.002 CrossRef
ချာလ်တန်, ဂျေပီ, & Danforth, ဗြဲ D. (2010) ။ ကွန်ပြူတာစွဲစွဲလမ်းမှုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတို့အကြားခြားနားချက်ကိုစစ်ဆေးခြင်း - အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး။ အပြုအမူ & သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ, 29 (6), 601-613 ။ Doi: 10.1080 / 01449290903401978 CrossRef
Ciclitira, K. (2004) ။ ညစ်ညမ်း, အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသမီးတိုက်ပွဲ: အပျော်အပါးများနှင့်နိုင်ငံရေးအကြား။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ,7(3), 281-301 ။ Doi: 10.1177 / 1363460704040143 CrossRef
Confer, ဂျေစီ, Easton, ဂျေအေ, Fleischman, S. အက်စ်, Goetz, C. D. , Lewis က, D. အမ်, Perilloux, C တို့, & Buss, M. အမ် (2010) ။ Evolutionarypsychology: အငြင်းပွားမှုများ၊ မေးခွန်းများ၊ အလားအလာများနှင့်ကန့်သတ်ချက်များ။ အမေရိကန်စိတ်ပညာရှင်, 65 (2), 110-126 ။ Doi: 10.1037 / a0018413 CrossRef, Medline
Cooper က, အေ (1998) ။ လိင်နှင့်အင်တာနက် - ထောင်စုနှစ်သစ်သို့ဝင်ရောက်ခြင်း။ CyberPsychology & Behavior, 1, 187-193 ။ Doi: 10.1089 / cpb.1998.1.187 CrossRef
ဆက်စပ်မှု, အက်စ် (1995) ။ အီလက်ထရွန်းနစ်ဘားဖွလိင်တူချစ်သူကဖီး၏ ethnography ။ ခေတ်ပြိုင် Ethnography, 24 ၏ဂျာနယ်, 270-298 ။ Doi: 10.1177 / 089124195024003002
ဟင်း, အက်စ် R. , Hodgins, C. C. , & ကာဇီ, M. အမ် (2013) ။ လောင်းကစားပြင်းထန်မှုအညွှန်းကိန်းအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူအမျိုးအစားပြtheနာများ၏တရားဝင်မှု။ လောင်းကစားလေ့လာရေးဂျာနယ်, 29 (2), 311-327 ။ Doi: 10.1007 / s10899-012-9300-6 CrossRef, Medline
Davis က, R. အေ, Flett, G. အအယ်လ်, & Besser, အေ (2002) ။ ပြproblemနာရှိသောအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုတိုင်းတာရန်စကေးအသစ်တစ်ခုကိုအတည်ပြုခြင်း - အလုပ်မတိုင်မီစစ်ဆေးခြင်းအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ ဆိုက်ဘာစိတ်ပညာ & အပြုအမူ,5(4), 331-345 ။ Doi: 10.1089 / 109493102760275581 CrossRef, Medline
Delmonico, L. L. , & Miller က, ဂျေအေ (2003) ။ အင်တာနက်လိင်စစ်ဆေးခြင်းစမ်းသပ်မှု - လိင်ဆိုင်ရာမကျူးလွန်မှုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်လိင်ဆိုင်ရာမကျူးလွန်မှုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း။ လိင်နှင့်ဆက်ဆံရေးကုထုံး, 18 (3), 261-276 ။ Doi: 10.1080 / 1468199031000153900 CrossRef
Derogatis, အယ်လ် R. (2001) ။ အတိုချုပ်လက္ခဏာပြ Inventory -18 (BSI-18): အုပ်ချုပ်ရေး, အမှတ်ပေးနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို manual ။ Minneapolis, MN: အမျိုးသားကွန်ပျူတာစနစ်များ။
Diener, အီး D. , Emmons, R. အေ, Larsen, R. ဂျေ, & Griffin, အက်စ် (1985) ။ ဘဝအတိုင်းအတာနှင့်အတူကျေနပ်မှု။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအကဲဖြတ်၏ဂျာနယ်, 49 (1), 71-75 ။ Doi: 10.1207 / s15327752jpa4901_13 CrossRef, Medline
Fiorino, F. အက်ဖ်, Coury, အေ, & Phillips က, အေဂျီ (1997) ။ နျူကလိယပြောင်းလဲမှုသည်အထီးကြွက်များတွင် Coolidge အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွင်း dopamine efflux accumbens Journalof အာရုံကြောသိပ္ပံ, 17 (12), 4849-4855 ။ Doi: 0270-6474 / 97/174849-07 $ 05.00 /0Medline
ရေလွှမ်းမိုးခြင်း, အမ် (2009) ။ ကလေးများနှင့်လူငယ်များကြားတွင်ညစ်ညမ်းထိတွေ့မှုများ၏ပျက်ဆီး။ ကလေးသူငယ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, 18 (6), 384-400 အလွဲသုံးစားပြုမှု။ Doi: 10.1002 / car.1092 CrossRef
Griffiths က, အမ် D. (2012) ။ အင်တာနက်လိင်စွဲ - ပင်ကိုယ်မူလသုတေသနတစ်ခု။ စွဲသုတေသန & သီအိုရီ, 20 (2), 111-124 ။ Doi: 10.3109 / 16066359.2011.588351 CrossRef
Grubbs, ဂျေခ, Sessoms, ဂျေ, ဝီ, M. အမ်, & Volk, အက်ဖ် (2010) ။ ဆိုက်ဘာညစ်ညမ်းစာပေအသုံးပြုမှုစာရင်း - အကဲဖြတ်ချက်အသစ်တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်း။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးစစ်ဆင်ခြင်း၊ ၁၇ (၂)၊ ၁၀၆–၁၂၆.doi: 17 /2CrossRef
Hald, G. အအမ်, & Malamuth, N. အမ် (2008) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှု၏မိမိကိုယ်ကိုမြင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်းတိုက်, 37 (4), 614-625.doi: 10.1007 / s10508-007-9212-1 CrossRef, Medline
Hendrick, အက်စ်အက်စ်, Dicke, အေ, & Hendrick, C တို့ (1998) ။ ဆက်ဆံရေးအကဲဖြတ်စကေး။ လူမှုရေးနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်ဆံရေးဂျာနယ်, 15 (1), 137-142.doi: 10.1177 / 0265407598151009 CrossRef
Hilton, L. L. , Jr. & Watts, C. (2011) ။ အပြာစာပေစွဲခြင်း - အာရုံကြောသိပ္ပံရှုထောင့်။ ခွဲစိတ်အာရုံကြောဆိုင်ရာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ, 2, 19 Doi: 10.4103 / 2152-7806.76977 CrossRef, Medline
Jansz, ဂျေ (2005) ။ ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးတို့အတွက်အကြမ်းဖက်ဗီဒီယိုဂိမ်းများ၏စိတ်ခံစားမှုအယူခံဝင်။ ဆက်သွယ်ရေးသီအိုရီ, 15 (3), 219-241 ။ Doi: 10.1111 / j.1468-2885.2005.tb00334.x CrossRef
Kafka, အမ်ပီ (2010) ။ Hypersexual ရောဂါ: forDSM-V ကိုတစ် ဦး ကအဆိုပြုထားရောဂါ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်းတိုက်, 39 (2), 377-400 ။ Doi: 10.1007 / s10508-009-9574-7 CrossRef, Medline
Kaufman, အမ်, Silverberg, C. , & Odette, အက်ဖ် (2007) ။ လိင်နှင့်မသန်စွမ်းမှုအတွက်လမ်းညွှန်။ ဆန်ဖရန်စစ္စကို, CA: Cleis ။
ကင်မ်, အက်စ်ဒဗလျူ, Schenck, C. အိပ်ချ်, Grant ကဂျေအီး, Yoon, G. အ, Dosa, P. ဗြဲ, Odlaug, ခ L. , Schreiber, L. R. N. , Hurwitz, T. T. , & Pfaus, ဂျေဂျီ (2013) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏ Neurobiology ။ Neuro Quantology, 11 (2), 332-359 ။ Doi: 10.14704 / nq.2013.11.2.662 CrossRef
Kingston, D. အေ, & Malamuth, N. အမ် (2010) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်မှုလေ့လာခြင်းတွင်စုစည်းထားသည့်အချက်အလက်များနှင့်တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှု၏အရေးပါမှုနှင့်အတူပြနာများ - Diamond, Jozifkova နှင့် Weiss အပေါ်မှတ်ချက်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, 40, 1045-1048 ၏မော်ကွန်းတိုက်။ Doi: 10.1007 / s10508-011-9743-3 CrossRef
Kinnick, K. (2007) ။ စာအိတ်တွန်းအားပေးခြင်း - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအဓိကထားဖော်ပြသောမီဒီယာ၏အခန်းကဏ္။ A. Hall နှင့်အမ်ဘိရှော့ပ် (Eds) တွင်ပေါ့ပ် porn - အမေရိကန်ယဉ်ကျေးမှုတွင်အပြာစာပေများ (စစ။ ၇-၂၆) ။ London: Praeger
Koch, N. အက်စ်, & Schockman, အိပ်ချ်အီး (1998) ။ လိင်တူချစ်ခြင်း၊ လိင်တူဆက်ဆံခြင်းနှင့်ရိုးရိုးရိုးရိုးလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများအတွင်းအင်တာနက်အသုံးပြုခွင့်ကိုဒီမိုကရေစီနည်းကျကျင့်သုံးခြင်း။ ခ Ebo (Ed ။ ), Cyberghetto သို့မဟုတ် cybertopia ၌ရှိသလော အင်တာနက်၊ လူမျိုး၊ လူတန်းစားနှင့်ကျားမခွဲခြားမှု။ (စစ။ ၁၇၁-၁၈၄) Westport, မှန် CT: Praeger ။
Kühn, S, & Gallinat, ဂျေ (၂၀၁၄) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်ဆက်သွယ်မှု - porn ပေါ်ရှိ ဦး နှောက်။ JAMA စိတ်ရောဂါကုသမှု, 2014 (71), 7-827 ။ Doi: 834 / jamapsychiatry.10.1001 CrossRef, Medline
Leiner, ခအမ်, Cerf, V. G. အ, Clark က, D. D. , Kahn, R. အီး, Kleinrock, L. , Lynch, C. C. , Postel, ဂျေ, Roberts သည်, အယ်လ် G. အ, & Wolff, အက်စ် (2009) ။ အင်တာနက်၏သမိုင်းအကျဉ်း။ ACM SIGCOMM ကွန်ပျူတာဆက်သွယ်ရေးပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း၊ ၃၉ (၅)၊ ၂၂-၃၁ ။ Doi: 39 /5CrossRef
Malamuth, N. အမ် (1996) ။ လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောမီဒီယာ၊ ကျား၊ ဆက်သွယ်ရေး၏ဂျာနယ်, 46, 8-31 ။ Doi: 10.1111 / j.1460-2466.1996.tb01486.x
McLelland, အမ်ဂျေ (2002) ။ Virtual ethnography - ဂျပန်နိုင်ငံတွင်လိင်တူချစ်သူများကိုလေ့လာရန်အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်း။ လိင်, 5, 387-406.doi: 10.1177 / 1363460702005004001 CrossRef
Meijer, R. R. , က de Vries, R. အမ်, & ဗန် Bruggen, V. (2011) ။ item response response-Brief Symptom Inventory-18 ကိုအကဲဖြတ်ခြင်း - စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆင်းရဲခြင်းနှင့်မည်သည့်အရာများနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသနည်း။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်, 23 (1), 193. Doi: 10.1037 / a0021292 CrossRef, Medline
Mitchell က K. ဂျေ၊ Finkelhor၊ ,, & Wolak, ဂျေ (2003) ။ အင်တာနက်ပေါ်တွင်လူငယ်များမလိုလားအပ်သောလိင်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနှင့်ထိတွေ့ခြင်း - အန္တရာယ်၊ သက်ရောက်မှုနှင့်ကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာအမျိုးသားစစ်တမ်း။ လူငယ် & လူ့အဖွဲ့အစည်း, 34 (3), 330-358 ။ Doi: 10.1177 / 0044118X02250123 CrossRef
Morahan-မာတင်, ဂျေ (2005) ။ အင်တာနက်ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်: စွဲ? disorder? လက္ခဏာတွေ? အခြားရွေးချယ်စရာရှင်းလင်းချက်? လူမှုရေးသိပ္ပံ Computer ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, 23 (1), 39-48 ။ Doi: 10.1177 / 0894439304271533 CrossRef
Ng, ခ D. , & Wiemer-Hastings က, P. (2005) ။ အင်တာနက်စွဲလမ်းခြင်းနှင့်အွန်လိုင်းဂိမ်းများ။ CyberPsychology & အပြုအမူ၊ ၈ (၂)၊ ၁၁၀-၁၁၃ ။ Doi: 8 / cpb.2 CrossRef, Medline
Orzack, အမ်အိပ်ချ်, & ရော့စ်, C. ဂျေ (2000) ။ virtualsex ကိုအခြားလိင်စွဲလမ်းမှုကဲ့သို့ဆက်ဆံသင့်သလား။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးစစ်ဆင်ခြင်း၊ ၇၊ ၁၁၃-၁၂၅ ။ Doi:7/ 113 CrossRef
ပတေရုသ, ဂျေ, & Valkenburg, P. အမ် (2007) ။ ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်မှုဆိုင်ရာမီဒီယာပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်အမျိုးသမီးများ၏လိင်မှုဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုများ၏အယူအဆများနှင့်ထိတွေ့ခြင်း။ လိင်အခန်းကဏ္,, 56 (5-6), 381-395 ။ Doi: 10.1007 / s11199-006-9176-y ကို CrossRef
Petry, NM, Rehbein, F. , Gentile, DA, Lemmens, JS, Rumpf, H.-J. , Mößle, T. , Bischof, G. အ, Tao, R. , Fung, DSS, Borges, G. အ, Auriacombe , အမ်, Ibáñez, AG, Tam, P. , & O'Brien, CP (2014) ။ DSM-5 ချဉ်းကပ်နည်းအသစ်ကို အသုံးပြု၍ အင်တာနက်ဂိမ်းကစားခြင်းပြassessနာကိုအကဲဖြတ်ရန်နိုင်ငံတကာသဘောတူညီမှု စွဲ, 109 (9), 1399-1406 ။ Doi: 10.1111 / add.12457 CrossRef, Medline
Philaretou, အေဂျီ၊ မာဖွတ်၊ အေအူ၊ & အယ်လန်၊ ကေ R. (2005) ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်အမျိုးသားများ၏သုခချမ်းသာကိုအသုံးပြုခြင်း။ အမျိုးသားကျန်းမာရေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်၊ ၄ (၂)၊ ၁၄၉-၁၆၉.doi:4/ jmh.2 CrossRef
အိုး, K. K. , Vialou, V. , Nestler, အီးဂျေ, Laviolette, အက်စ် R. , Lehman, အမ် N. , & Coolen, အယ်လ်အမ် (2013) ။ သဘာဝနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုများသည်ΔFosBနှင့်အဓိကအာရုံကြောပလပ်စတစ်ယန္တရားများကိုအဓိကဖျန်ဖြေသူအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ အာရုံကြောသိပ္ပံဂျာနယ်, 33 (8), 3434-3442 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.4881-12.2013 CrossRef, Medline
Poulsen, အက်ဖ် O. , Busby, D. အမ်, & Galovan, အေအမ် (2013) ။ အပြာစာပေအသုံးပြုမှု။ ၎င်းကိုမည်သူအသုံးပြုသည်၊ ၎င်းသည်စုံတွဲရလဒ်များနှင့်မည်သို့ဆက်စပ်သည် လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 50 (1), 72-83 ။ Doi: 10.1080 / 00224499.2011.648027 CrossRef, Medline
ရော်ဘင်ဆင်, တီအီး, & Berridge, K. C. (1993) ။ မူးယစ်တပ်မက်၏အာရုံကြောအခြေခံ: စွဲသီအိုရီတစ်ခုမက်လုံးပေး - sensitization ။ ဦး နှောက်သုတေသနသုံးသပ်ချက်များ, 18 (3), 247-291 ။ Doi: 10.1016 / 0165-0173 (93) 90013-P ကို CrossRef, Medline
Ropelato, ဂျေ (2006) ။ ၂၀၀၆ နှင့် ၂၀၀၅ ခုနှစ်အမေရိကန်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာစက်မှုလုပ်ငန်းအခွန်များ။ ထိပ်တန်းဆယ်ပါးသုံးသပ်ချက်များ၌တည်၏။ မှရယူရန် http://internet-filter-review.toptenreviews.com/internet-pornography-statistics.html
Roxo, အမ် R. , Franceschini, P. R. , Zubaran, C တို့, Kleber, အက်ဖ် D. , & Sander, ဂျေဒဗလျူ (2011) ။ အဆိုပါ limbic စနစ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းနှင့်၎င်း၏သမိုင်းဆိုင်ရာဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်။ သိပ္ပံနည်းကျကမ္ဘာ့ဂျာနယ်, 11, 2427-2440 ။ Doi: 10.1100 / 2011/157150 CrossRef
Sabina, C တို့, Wolak, ဂျေ, & Finkelhor, D. (2008) ။ လူငယ်များအတွက်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏သဘာဝနှင့်ဒိုင်းနမစ်။ ဆိုက်ဘာစိတ်ပညာ & အပြုအမူ, 11 (6), 691-693.doi: 10.1089 / cpb.2007.0179 CrossRef, Medline
Schneider, ဂျေပီ (2000) ။ cybersex သင်တန်းသားများကိုတစ် ဦး ကအရည်အသွေးလေ့လာမှု: ကျားကွဲပြားမှု, ပြန်လည်ထူထောင်ရေးပြissuesနာများနှင့်ကုထုံးများအတွက်သက်ရောက်မှု။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးထွင်းခြင်း, 7, 249-278.doi: 10.1080 / 10720160008403700 CrossRef
ငွေ, K. (2012) ။ ငါးများတွင်တစ်ဦးအဖြစ်ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်အကြမ်းဖက်မှုများမှကလေးများဖော်ထုတ်စမတ်ဖုန်းမသင့်လျော်ပစ္စည်းကြည့်ရှုရန်ဝန်ခံ။ Daily Mail က၌။ မှရယူရန် www.dailymail.co.uk/news/article-2093772/Smartphones-exposing-children-pornography-violence-1-2m-youngsters-admit-logging-on.html#ixzz2JvyG75vY
Sinković, အမ်, Štulhofer, အေ, & Božić, ဂျေ (2013) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်အစောပိုင်းလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုရှာဖွေခြင်း၏အခန်းကဏ္။ ။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 50 (7), 633-641 ။ Doi: 10.1080 / 00224499.2012.681403
Twohig, အမ်ပီ, Crosby, ဂျေအမ်, & ကော့, ဂျေအမ် (2009) ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုကြည့်ခြင်း - မည်သူသည်ပြForနာဖြစ်သနည်း၊ မည်သို့နှင့်အဘယ်ကြောင့်နည်း။ လိင်စွဲ & compulsivity, 16, 253-266 ။ Doi: 10.1080 / 10720160903300788 CrossRef
Vasey, P. L. , & Abild, အမ် (2013) ။ သန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောအကြံအစည်များ - အင်တာနက်ကလိင်ဆက်ဆံခြင်းအကြောင်းပြောပြသည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်းတိုက်, 42 (6), 1101-1103 ။ Doi: 10.1007 / s10508-013-0170-5 CrossRef
တီဗန်၊ ဘန်ကာ၊ ပီ၊ ပေါ်တာ၊ အယ်လ်၊ မောရစ်၊ အယ်လ်၊ မစ်ချယ်၊ အက်စ်၊ လားပ၊ TR၊ Karr၊ ဂျေ၊ Harrison၊ NA, Potenza, MN, & Irvine, M ။ (2014) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်မပါဘဲတစ် ဦး ချင်းစီ၌လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု၏အာရုံကြောဆက်စပ်မှုများ။ PloSOne,9(7), e102419 ။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0102419 CrossRef
Wilson က, G. အ (2014) ။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်စွဲလမ်း၏ထွန်းသစ်စသိပ္ပံပညာ: porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက်။ Margate, Kent: ဓနသဟာယထုတ်ဝေရေး။
Wilson က, G. အ D. (1997) ။ လိင်စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းတွင်ကျား၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်တစ် ဦး ချင်းကွာခြားချက်များ, 22 (1), 27-31 ။ Doi: 10.1016 / S0191-8869 (96) 00180-8 CrossRef
Wong က, U. , & Hodgins, C. C. (2013) ။ လူကြီးများအတွက်ဂိမ်းစွဲပစ္စည်းစာရင်းပြုစုခြင်း (GAIA) ။ စွဲသုတေသန & သီအိုရီ, 22 (3), 195-209.doi: 10.3109 / 16066359.2013.824565 CrossRef
Wuensch, K. L. (2014) ။ Curvilinear bivariate ဆုတ်ယုတ်။ စိတ်ပညာ၏အရှေ့ကာရိုလိုင်းနားတက္ကသိုလ် ဦး စီးဌာန၌တည်၏။ မှရယူရန် http://core.ecu.edu/psyc/wuenschk/MV/multReg/Curvi.docx
Wynn, အိပ်ချ် (2003) ။ ကနေဒါပြဿနာလောင်းကစားညွှန်းကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်း။ Edmonton, AB: Wynn အရင်းအမြစ်များ။
Ybarra, အမ်အယ်လ်, & မစ်ချယ်, K. ဂျေ (2005) ။ ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များအကြားအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ထိတွေ့ခြင်း - အမျိုးသားစစ်တမ်း။ CyberPsychology & Behavior, 8 (5), 473-486 ။ Doi: 10.1089 / cpb.2005.8.473 CrossRef, Medline
Yoder, V. C. , Virden, T. ခ, III ကို, & Amin, K. (2005) ။ အင်တာနက်အပြာစာပေနှင့်အထီးကျန်ခြင်း - အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုလား။ လိင်စွဲ & မငြိမ်မသက်, 12 (1), 19-44 ။ Doi: 10.1080 / 10720160590933653 CrossRef
လူငယ် K. အက်စ် (2004) ။ အင်တာနက်စွဲသစ်တစ်ခုလက်တွေ့ဖြစ်ရပ်ဆန်းနှင့်၎င်း၏အကျိုးဆက်များ။ အမေရိကန်အမူအကျင့်သိပ္ပံပညာရှင်, 48 (4), 402-415 ။ Doi: 10.1177 / 0002764204270278 CrossRef
Zillmann,,, & Bryant, ဂျေ (1986) ။ အပြာစာပေရုပ်ပုံကြည့်ရှုခြင်းကိုနှစ်သက်ခြင်း။ ဆက်သွယ်ရေးသုတေသန, 13 (4), 560-578 ။ Doi: 10.1177 / 009365086013004003